Ijikwa blog abụghị ọrụ dị mfe, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agbalịsi ike ibipụta ihe ndị dị mma nke ndị na-agụ gị na-ahụ n’anya mgbe ị Ghaghị ịmepụta oge iji zụlọ nụị na na ng na na gị na ebe ịntanetị, na ikekwe ọbụna bipụta otu ụlọ ọrụ ọbịa.
Y’oburu n’ibu ịmalite ịde blọgụ ma ọ bụ ịkwesịrị ịhapụ blog gị ka ọ jiri aka ya rụọ nwa oge, ya nile a ga – eme nwere ike ịda.
Nke a na-abịa na nnapụta gị: ma ị bụ onye na-amalite ma ọ bụ onye nchịkọta akụkọ, ọ ga-eduzi gị sayt na isi ihe nhazi nke blog ici nwee ike iwebata akwụkwọ ndị ọbịa na oz kala na om kala gị.
1 Blog Ịhazi usoro
1.1 A na-ahazi nduzi a dị ka ndị a:
1.2 Yalnız Blogunuzu və ya adətlərinizi yazın?
2.0.2 Jiri Kalinda Redaksiya
3 2. Ịnọ na-arụpụta
3.0.2 Soro "Muse" Gị
7.1 Ọ bụrụ na Ị Chọrọ Bir Blogger
9 Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Bloglar üçün bloglar (pulsuz)
9.2 Nə WordPress-də
9.5 İstehsalçıların fikirləri
9.11 Bipute Akwukwo Ntanetị na Ndepụta Ndepụta
10 Wepụ ya
Blog Ịhazi usoro
Ọ bụrụ na ịnweghị ike itinye ego ọzọ na ihe a, e nwere ọtụtụ ngwa ngwa ndị ị nwere ike ibudata na ekwentị gị ma ọ bụ kọmputa, kalenda dabeere na PHP neere eb nụọbụụụn ịbụn ịbụn ịbụn ịbụn ịbn ịbn bendan bendan bendan benda endaendaenda n’efu ị nwere ike ibipụta pụọ ​​ma jupụta n’aka.
Ozugbo i nwere, ị nwere ịmalite ime atmatmatụ.
A na-ahazi nduzi a dị ka ndị a:
Nchọpụta nsogbu (mgbe ihe anaghị aga dịka emere atmatizm)
Mgbe ihe ndị bụ isi, ị ga-agụ banyere otu esi agụnye oge oge gị, daha usoro ihe omume nke nwere ike inyere gị aka ịmepụta atụmatụ ị na-enwe.
Yalnız Blogunuzu və ya adətlərinizi yazın?
Ray Addison və RayAddisonLive.com b blog onye nchịkọta ọhụrụ nke nọ na-eche otú ị ga-esi ahazi ya ma blog blog. Mgbe o nyochachara ndụmọdụ nlekọta blog, ọ kpebiri və blog kwa izu ma gbalịa ịrapara na atmatmat ahụ, na-ejikwa "ntinye akwụkwọ kwa ụbọchị dị ka mkpali maka ederede ọzọ m na-ede."
Addison mụtara na ọ dị oké mkpa ka ị "debe aha na nchịkọta akụkọ m ka m wee nwee oge ị ga-arụ ọrụ na imegharị ihe dịka mgbanwe mgbanwe m. Onlayn rejimdə olmaq üçün heç bir şey edə bilməzsiniz. M na-achọkwa eziokwu ahụ bụ na ọ dị mkpa na ị na-edepụta pụtara na m ga-aga n’ihu. "
Nke bir bụ ike nke usro nhazi blogunu.
EE, ntuziaka ị na-agụ bụ ihe niile gbasara ịghọ onye na – ede blọgụ dị egwu Sərin, hə?
Ndụmọdụ m dị ka onye na-ede blọgụ na ọtụtụ nsogbu ahụike bụ ịnye onwe gị otu nro na otu njedebe siri ike:
Bir oge njedebe bụ oge dị mma, oge na ụbọchị ịchọrọ ịnwe ọdịnaya gị ka ọ dịzie. Ọ bụrụ n ‘engweghị ahụ iru ala, w negere ịmegharị oge a dị mkpirikpi.
A oge nkpeazu siri ike bụ otu nke ị na-engweghị ike ịkwụsị, n’ihi na ọ na-efu ya ga-egbochi gị atụmatụ
Bụrụ onye blogger dị mma mae ka ọ dị nro na oge siri ike maka oge gị!
Ịrụ ọrụ oge nkwụsị na nke siri ike ga-enye gị ohere zuru oke iji nweta nchọpụta, ide na idezi ndụ ma ọ bụ ọrụ azụmahịa ndị ọzọ na-enweta n’ụzọ nke oge gị. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ na-enyere gị aka ịnọ na egwu.
Elizabeth Carter, Clariant Yaradıcılıq Agentliyi, 2000-ci illərin ən yaxşısıdır. Afọ nke ahụmahụ kụziiri ya na "enweghị inwe usoro ịdekọ oge na-agaghị eme ka ị ghara ịde blog n’usoro."
Elə bir ime atụmatụ kwa izu, kwa ọnwa, nkeji ọnwa ọ bụla, kwa ọnwa isii ma ọ bụ otu ugboro n’afọ. Karter na-enwetakarị nsonaazụ kachasị mma mgbe na-echepụta kalenda ya sayt na nkeji iri na is, men "Enwere m oge ụfọdụ na kalenda ọnwa kwa ọnwa" na "Enweghị m ike azihazi usoro ihe ọ bụla na-erughi kwa ọnwa. Ndụ na – eme, na n’agbanyeghị ezigbo ebumnuche anyị, anyị na – arụsi ọrụ ike ma na – ede na ntinye akwụkwọ akụkọ ahụ ga – eme ka ọ daa n’ụzọ. Omume dị mfe nke ịmepụta blog ahụ ezubere wepụ ọtụtụ n’ime edemede nke ide akwụkwọ ahụ n’ezie, ebe ọ bụ na akụkụ siri ike – na – abịa na echiche – emeworịrịrị. "
Carter kwukwara, və:
İstiqlal məlumatları ilə tanış olmaq üçün blog-blog. O yikarịrị, ị na-agbazi ihe karịrị otu ụdị agụ. Ya sadəcə, ị ga-achọ ijide n’aka na ị na-edozi ihe ndị ị na-edezi iji dozie nchegbu nke nke ọ bụla n’ime ndị na-ege gị ntị. O siri ike ime na nhazi oge nchịkọta oge, ma ọ dị mfe karịa mgbe ị na-elele anya ọnwa atọ.
Nke ahụ ga-adị mfe karị ma ọ bụrụ na ịchọta isiokwu 4 ma ọ bụ 5 na niche gị, ị nwere ike ịbanye na usoro nke ismarışları, ya sadəcə, ị nwere ike ịchọta ma nyochaa tupu oge mae kaịọịịọ.
Stan Kimer, Mkpokọta ejikọta ọnụ, malitere azụmahịa nke aka ya na di dihehe iche di iche iche na oru mmepe oru na 2010. Ọ na-eji ịde blọgụ iji gosipụta ihe ụmụma ya banyụio. "Ịrụ ọrụ ọrụ dị oke egwu. Ya sadəcə, enweela m oge niile na ịde blọgụ ebe ọ bụ na 2010 na-aga – nke kachasị 2 ma ọ bụ 3 blọọgụ kwa ọnwa ma ọ na-adịkarị na-efu otu ọnwa. "
Bọgh blog naanị banyere blog – e nwere akwụkwọ akụkọ ọ ga-elekta, yaxşı. "M na-ezipụ akwụkwọ akụkọ kwa ọnwa nke na-adọta okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ ahụ," ka Kimer na-ekwu, "ya sadəcə, anaghị ebipụta blog n’otu izu nke ọnwa ahụ m na-ezipụ akwụkwọ akụkọ. Anagị m ebipụta ihe karịrị otu blog n’izu ọ gwụla ma m nwere ọnọdụ pụrụ iche. "
Onu edemede ya da okwu Joyce Kyles ilə tanış olun. Ndụmọdụ ya nye ndị na-ede blọgụ ọhụrụ bụ "ime ihe m kụziri dịka ike 90. 90 nkeji kwa ụbọchị ma lekwasị anya na otu oru idi. Ya sadəcə, ugboro abụọ n’izu, Ana m etinye 90 nkeji nanị na-ede blọọgụ m, ma ọ bụrụ na ị na-eji WordPress, bu nəhayət ikiqat ịhọrọ ụbọchị mbipụta. "
Gbaa nyocha weebụ maka "ntanetị weebụ nke-enye gị ohere ịtinye okwu abụọ ma ọ bụ atọ ma mepụta isiokwu blog maka otu afọ maka n’efu" – na hər hansı bir WHSR var, ya da WHSR, yaxşı! Lelee anya ntanetị nke anyị na ndị na-echepụta echiche na ndepụta nke ngwaọrụ atụmatụ na njedebe nke nduzi a.
Facebook-da nhazi usoro (nbb ozi ndi ọzọ).
Metyu Geyts, ya da Nkwupụta nke Ọrụ, na-atụ aro na ị ga-amalite obere ma chọọ 1-2 ismarıc kwa izu ọ bụrụ na ị na-amalite. "Ozugbo ị malitere ịmalite na-ewu ewu," ka ọ na-ekwu, "ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-enweta nkwanye ùgwù, ị ga-achọ maka ịkwado dịka usoro oge izu ọrụ nke 5 (MF). Ihe kacha mma ị ga – eme bụ ide ederede tupu ị gawa, [yabụ] emela ka ị na – edepụta ha. Dee ma ọ dịkarịa ala 10. Bido na-edepụta 1-2 [izu] otu izu, ma na-ede ma ọ dịkarịa ala 1-2 n’izu. "
Ogologo oge ị nwere itinye aka na ịde blọgụ na-adabere n’ogologo na nkọwa nke isiokwu gị, nri? Qapılar ndụmọdụ maka ndị na-ede blọgụ ogologo oge:
"Ọ bụrụ na ịchọrọ ide ederede ogologo oge bụ okwu 2000 m ma bụ karịa, mgbe ahụ, ị ​​nịere ike ịpụ na ịmepụta ụbọchị ole na ole n’izu. Ọ bụrụ na ị dee ederede mkpirikpi, n’etiti okwu 500-1000, mgbe ahụ, ọ ga-akacha mma ịmepụta ugboro ole n’izu. E nweghị n’ezie ma ọ bụ ihe ọjọọ, mana ọ bụrụ na ị na-ezite otu ugboro n’izu ma ọ bụ otu ugboro n’ọnwa, blog gị ga-ahụ ndị nwụnahụrụ, ndị ọbịa ga-abụkawa na ag ag. "
Echiche Gates bụ na blọọgụ kwesịrị ịdị “ka ọ dị ndụ” dị ka o kwere mee, yabụ ibipụta akwụkwọ ole na ole kwa izu ga-abụ nhọrọ ka mma (ma ọ bụrụ na ị nu nu nu avanụborizịị). "Mana ọzọ, n’ịkwadebe maka ọnọdụ mberede ndị ahụ, ọ ka mma ide banyere isiokwu 10 tupu oge eruo, ma nwee ọ dịkarịa ala 3 maka nkwado ndabere, ọ bụrụ na ị neta na ngetae ngọe ngọe ngọeụe ngụeọeọe ọ bụ ole na ole. izu. ”
Jiri Kalinda Redaksiya
Ka anyị lebawanye anya n’ịdị irè nke iji kalenda ederede.
Nye Julie Evald, Nchọpụta Impressa’nın na-ede bloqunu və ya n’ọiiii naọụụụiaiaụụụụụụụụụụụụụ ụịị Im Imiaiaiaiaiapresspresspresspresspresspresspresspresspresspress "eneere nme ya nke ọma saytı na iji akwụkwọ ntụgharị (m-eji Smartsheet) ilə əlaqə saxlayın Google."
Evval na-atụ aro ka ị "lee ma dọkarịa ala ọnwa abụọ n’ọdịnihu. N’ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịnweta nlezianya dị mma nke ọtụtụ ismarışları ị ga – eịrịrị na oge etinyere, ma nwee ike ịmepụta (ma rụọ ọrụ na n’ihu) ismarışları na ọdịnaya oge ma na ak ak ahịa ndị ọzọ. Ma ọ bụghị ya, wchọta onwe gị iji mepụta ismarışları na oge-ma ọ bụ enweghị ihe ọ bụla ị ga-etinye ma ọ bụrụ na i nwebeghị ihe ọ bụla ma ọ bụ nwee ihe mberede. "
Ị ga-ahụ ndepụta nke ederede kalenda ederede na ngwaọrụ ndị ọzọ na njedebe nke a post.
2. Ịnọ na-arụpụta
Bir fincan tii, ole na ole na-agbaji, bir obere mmega ahụ, egwú dị nro na, nke kachasị mkpa, bir echiche ziri ezi nwere ike niile aka gị mpaghara na, na bụrụ na ị na-enwe mgbagwoju anya, enw ihe ole na ole i nwere ike ịnwale iji nyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị.
Ma nke ahụ abụghị ihe niile gbasara arụpụta ihe. Ị ga – acọpụta ihe ndị ọzọ n’èzí.
Dave Hermansen, 13 + az-aịụa na-azụ ahịa e-ticarət, Store Coach, Inc, na-eche ụzọ kachasị mma iji nọgide na-enwe echiche na-agbanwe agbanwe mgbe nile nke na-asọba, ọ dịghịkwa mgbe. ọ na-apụ na ntinye ederede bụ:
Soro dị ka ọtụtụ blọọgụ metụtara dịka i nwere ike. Ha nwere ikiqat mgbwo ihe mqbagwoju hər hansı bir nkeike mmụọ nsọ. RSS-lərdən xəbərdar olun. Kọọrọ onwe gị nchịkọta nke ụfọdụ n’ime isiokwu ndị dị mma ọbụna na-engweghị njikọ na niche gị. Jiri ha dị ka mmụọ nsọ maka ụfọdụ n’ime ihe ị nwere ike ide banyere. Kesaa ọtụtụ n’ime ezigbo isiokwu ọchọtara na networkọk mmekọrịta gị, mana chekwaa di na nwunye na ebe a dị ka echiche maka ihe ndị ị ne ike idere nke gị.
Ụtụle isiokwu dị iche iche ma na-ele ha hər hansı bir sayt na nkuku ọhụrụ, na ịmegharị ihe ochie gị ma ọ bụ ismarışları.
Soro "Muse" Gị
Atụmatụ dị oke mkpa, ma hapụ ma ọ dịkarịa ala ụbọchị ole na ole n’izu ebe i nwere ike "na-aga na mmiri ahụ" ma na-enwe obi ụtọ na blog gị. İdeal mqbe ị na-enwe mmet sitta sitere n’ike mmụọ nsọ saytına uyğun deyil "ịme ihe" gị ga-eme ka ị zere iwe ọkụ ma nyere gị aka ịmepụtakwu echiche maka blog banyere ọdịnihu.
Stan Kimer və ya “ngosi nka” ya münasibətilə:
Mgbe m na-enwe mmetụta dị oke ihe na dị ka ide ihe, en mere ike ide 2 ma ọ bụ 3 blọọgụ n’otu nnọkọ ka m wee nwee ole na ole n’ime boru kəməri dị njikere ịga. Mgbe ụfọdụ m nwere echiche blog blog nke ga-adị ogologo, nihi ya, m ga-eme usoro 2 ma ọ bụ 3.
Ọ bụrụ na m gaa ogbako na-adọrọ mmasị ma ọ bụ nzukọ na mpaghara ndị m na-achọ, m ga-ede blog ma ọ bụ abụọ maka ya. Cənubi Afrika, mgbe m gara Şimali Karolina SHRM (İnsan Resursları Konfransı Cəmiyyəti), [mgbe ahụ na ngwụcha izu] m debere mpempe abụọ aba maka okwu abụọ bụ isi nke m ga-ebipụta n’oge a [n’ọnwa].
Ọzọkwa, ọ bụrụ na m na şəbəkə na onye na-adọrọ mmasị ma ọ bụ azụmahịa, nke ahụ ga-enye m echiche maka blog, [ma] ọ bụrụ na m nweta ụfọdụ echiche blog blog m ga-edeba ya, n’ih ya, echefughị ​​m ya.
Qaldıran nənə ilə tanış olursunuzsa, ya da mma ya da mma.
Danny Garcia “ya ị dị mkpa ịnweta atụmatụ ọdịnaya ma rapara na ya. Otu isi ihe dị na ndụmọdụ mmadụ nile na-enye ndị na-ede blọgụ bụ ịnọgidesi ike. Ọ baghị uru ọ bụla oge ị na – ezisa ma ọ bụrụhaala ndị na – agụ akwụkwọ gị mara ugboro ole ị na – ede biputere ma rapara na nke ahụ. Aga m ekwu na ugboro ugboro adịghị mkpa ka ọrụ mma, mana ịnwe opekata mpe akwụkwọ ọnwa abụọ ọ dị mma. ”
Bloq blogu ilə nbị nụịụọị (d Ne ka Neil Patel, maọ bụ Seth Godin) blog gburugburu ugboro abụọ n’ọnwa (Mark Manson ma ọ bụ Ryan Ezumike). Ha niile nwere nnukwu ndị na-ege ntị, ọ bụghị dabere na ugboro ole ha na-arụ ọrụ, kama n’ihi àgwà ha.
Stan Kimer na-agbasi mbọ ike "ntanye 2 ma ọ bụ 3 blọọgụ n’ihu usoro," ya sadəcə neye ike "inwe ihe dị njikere ma ọ bụrụ na m banye n’oge kachasị oge ma ọ bụ oge siri ike (ma ọ bụ ọbụna gaa ezumike!)."
A bịa n’ụdị ismarıclarınız, kalena, ole, Julie Ewald na-atụ aro ka ị “nyochaa ebumnuche g n, ndị na-ege gị ntị, na oge ole (ma ọ bụ ego)” . E kwesiri post obula n’otu n’otu na agwa ndi n’eji okwu okwu okwu n’onwe ha n’uzo iji mezuo ebumnuche gi obula ma obu ihe ere ugbu a. Ee, e kwesịrị inwe nnyochi ebe a. ”
Ewald na-atụ aro ka ị wepụta 4-na-6 mesajlar kwa ọnwa, ma ọ bụ 2 kilo izu, d opka opekempe, ma n’ikpeazụ, ị nwere ike ịga na nọmba ọ bụla ruo mgbe ị na-anọgidesi ike n’usoro oge ezipụ gị.
Mee ohere makka akwụkwọ ndị ọbịa na kalenda gị – ha adighi obere karịa ismarışları gị, ha na – enkere aka ịkwalite blog na nka gị.
Ihe ị ga – agharịrịrịrịrịrịrị, ị ga – eleghara blọọgụ gị anya maka ịme ndị ọbịa, na ị naghị anoụcha ọkụ na mbalị ịme ma ikike kachasị elu.
Danny Garcia, Stacklist.com-dan njikwa njikwa ahịa na ekwu na “ikenye ndị ọbịa na-ekpughere gị ndị na-ege ntị ọhụrụ ma na-enye saịtị gị ihe njikọ bara uru, yabụ zere weọ iwe ọwe na-ebute ụzọ idebanye ọbịa ma ọ bụ wepụta onwe gị (ọ bụrụ na enyeghị gị gị) nke ahụ kwesịrị inyere aka. ”
Garcia chọpụtakwara, “Bizi in-na və ya agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ nke ọma. Achọpụtara m na m bụ onye okike kachasị ọhụrụ mgbe m tetara n’ụtụtụ wee dee maka awa 2 tupu ihe ndọpụ uche ọ bụla abanye n’ụzọ. Mgbe en eretụtụ ihe ị ga – ede, ide ihe na – arụ ọrụ nke ọma, nke na – abụkarị ihe na – akpata iwe ọk en. ”
Ọnụọgụ ahụ wee mee 2 n’ime ismarıcları ndị ọbịa ahụ idi. Ọ bụ ezigbo iwu nke isi mkpisi aka ka itule idozi mbọ gị iji zere ma ọ bụ leda anya.
Dịka ọmụmaatụ, oge ntanetịime m na ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa ndị m ne ike ide na otu ọnwa kwesịrị iji ihe mgbu ederede 1000 – 1500 mee kwa ụbọchị. Ịgbalị imekwu ihe ga-görünürụ ahụike uche m ma tụfuo oge dum, ya sadəcə, iwebata nke ndị ọbịa ga-abụ nke ọma na nke ọma.
Ụmụ nwoke Palmer na-eetara, sị, "Iwepụ ndị ọbịa bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-eto eto." Ọ na-ekwu na nke a bụ eziokwu karịsịa maka ndị na-ede blọgụ ọhụrụ, ma kwado ka ị "bipụtara ọdịnaya gị n’otu ugboro n’izu. Mgbe ahụ, ọ ga-eziga otu onye n’izu n’izu. "
Notchọghị imefusị oge ị na-eji zụọ ahịa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ka ị chọghị ka ọ rie ya oge edere.
Ga-enwerịrị oge iji gbaa ọwa mgbasa ozi mgbasa ozi gị na ịkwalite ọdịnaya gị yana maka ịgakwa ajụjụ ndị mmadụ na azịza ya.
WỊ me meeee 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30ys 30ysysysysysysysysysysysysysysysysys
Iji hụ na ahịa mgbasa ozi na-ere ahịa na ịde blọgụ ọ bụla na-eri ihe, denye aha maka Hootsuite. Ọ bụ n’efu. Ugbu a maka usoro nhazi, [nha bụ] 70% -20% -10%:
70% nb mbak gị kwesịrị ka a kọọ – m na-ekwu maka retweets, foto / yenidən paylaşma, na ndị na-atụ n’anya na ị gbakwunye lil ‘somehin’ kwa.
20% mesajlar var ụbụ [ọdịnaya] ị kere – Ụlọ ọrụ blog gị na atụmatụ ndị ọbịa.
10% (10% -dən çox) mqbasa ozi gị kpọmkwem – Njikọ gị na onyinye gị, aspmi ị chọrọ nkwado na, usoro ma ọ bụ itemalite ịmalitere, webinarlar, wdg.
Ndị na-ege ntị na-etolite mgbe a na-ere ahịa. Ike.
Iji bido mgbalị gị na-azụ ahịa mmekọrịta, gụọ anyị mkpa nduzi mgbasa ozi mgbasa ozi ịmara ihe na-arụ ụrụ na isi ihe ntanetị mmekọrịta ma na-elekwasị anya na nke ahụ.
Kedu ihe ị ga – eme ma ọ bụrụ na ịnwe ọnọdụ mberede na ụbọchị ịchọrọ? Ma kedu ka ị ga – esi mee ka echiche ‘jupụta’ mgbe niile mgbe ọ dị gị ka ihe ọ sizin yaradıcılığınız okike gị agwụla?
Inwe oge dị nro ma sie ike ga – enyere gị aka ma ọ bụrụ na ị rịa ọrịa ma ọ bụ nwee ihe mberede, ma gị na ndị na – agụ akwụkwọ gị okwu bụ isi – ọ bụrụ na ịnwegng ngịe eme ka ha mara ma ọ bụ na ị ga – emechu ha ihu ma okporo ụzọ gị ga – ada .
Ọ bụ ihe Danny Garcia kpọrọ nchịkwa mmebi.
Ọ nwere ike ịdị mfe dịka ime ka ndị na – agụ akwụkwọ gị mara maka ya na ọwa na – elekọta mmadụ mgbasa ozi gị, nke na na na – agwa ha ya. Iji mee ka echiche ahụ jupụta mgbe niile, ị ga-agụ karịa ka ị na-ede. Mən hər hansı bir dere na-emetụta ihe anyị gụrụ. Ichoro otutu uzo di iche iche maka edemede gi obula.
Can iwi otu izu gụọ akwụkwọ naanị iji nweta ahịrịokwu ole na ole na ya naederede gị, ị bụ ya mere o ji dị mkpa ịgụ ọtụtụ ihe. Chọrọ ọtụtụ isi mmalite dị iche iche maka ozi / mmụọ. N’akwụkwọ, o nweghị uru ọ bara, mana ọgụgụ akwụkwọ na-eweta ihe ụmụma ma na-akpali imepụta ihe.
Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịchọpụta na kalenda gị ezugị oke maka ndụ onwe gị ugbu a. Mgbe ahe, chee echiche imepụta obere usoro na-eleba anya na, ma ọ bụ usoro ‘ndabere’ ị nwere ike iji mee ihe n’oge ndụ siri ike.
Raelyn Tan na-atụ aro na ị na-eme atụmatụ kwa ọnwa ma kwatuo usoro ahụ n’ime izu kwa izu:
Kwa ọnwa, m na-anọdụ ala ma depụta ihe m chọrọ iji mezuo maka ọnwa ahụ. Dị ka ọmụmaatụ, en mere ike ịtọ ihe mgbaru Xsọ ide X nọmba nke ismarışları blog nọmba X nke ụlọ ọrụ ndị ọbịa ma ọ bụ malite usoro ọhụrụ. Mgbe nke a qazịrị, m ga-agbaji ha n’ime ihe a ga-eme kwa izu.
Mgbe nsogbu mberede bilirik, m ike ịnabata ya n’ime usoro ịde blọgụ m n’ebughị nsogbu. Amaara m kpọmkwem ihe m kwesịrị ime maka izu ahụ, ọ bụrụ na m daa azụ ruo ụbọchị ole na ole, amaara m na agagị m ịchọta mgbe e mesịrị.
N’otu aka ahụ, ọ bụrụ na anaghị m arụpụta ihe n’ime izu ole na ole, en mere iki iji izu ụka ndị ọzọ ma nọrọ na egwu n’ihi na amaara m ihe niile a chọrọ iji mee n’ọnwa.
Ọ bụrụ na m eme atụmatụ kpọmkwem i m ga-eme maka ụbọchị ọ bụla, en mere nrụgide na-agbalị ịnwa "mgbe niile" na-arụ ọrụ. Achọpụtala m na ọ na-esiri m ike imezu oge a na-eme kwa ụbọchị, n’ihi na enwere mberede na mberede na-eme, n’ihi ya, m na-etinye kwa izu kwa ọnwa.
Ụmụnna Palmer, MysPalmer.com-un icraçı direktoru, maara na ndụ na-eme ma ị gaghị ike izere ya mgbe ọ sadəcə, yabụ “azihazi ọdịnaya gị otu izu tupu oge eruo na-elekọta ya. Needchọghị ịma mma. Banye na Hootsuite ma jiri ndị bipụta akwụkwọ lee izu na-abịa. İnternet şəbəkəsi ilə əlaqə qurma. ”
Ka o sina dị, ị gịgị na-emesi ya ike. Julie Ewald kwuru, belə: “Ọ bụrụ na ị ga-efu isi ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe ọzọ, awusi ya. “Daha çox özgbo və ya ike. Ọ bụrụ na ị na-eme ụdị mbọ SEO ọ bụla, ị ga-ahụ mbiara okporo ụzọ na ọkwa dị elu ma ọ bụrụ na ị tigharịa kpam kpam. ”
Ọ bụrụ na Ị Chọrọ Bir Blogger
Nik Brennan, Lelee Sosial Mediası ilə əlaqəli digər sənədləri təqdim edir: "E nwere igodo atọ iji hazie ma ọ bụrụ na na-edezi" na ị nwere onye ọzọ na-arụ ọrụ maka gị:
1. Akwukwo ọdịnaya di elu nke ebe ichoro ihe obula i choro ibi ndu kwa izu – uzo di nfe / akwukwo di nkpa, ihe di iche iche nke edere ya onye obula na nke ozo, wgg.
2. Otu echiche nkwụnye ego nke və ya ike ịbanye iji jupụta kalenda ahụ.
"Ọ bụrụhaala na ị nwere akwụkwọ edemede siri ike na ihe ndị a," ka Brennan na-agbakwụnye, "ìgwè gị ekwesịghị inwe nsogbu ịmepụta ọdịnaya dị mma sayt na mgbe niile."
Hər hansı bir WHSR düzəltmək üçün heç bir şey yox idi: "Blogger saytına daxil olmaq üçün Redaktor: Nedị edemede edemede məqalə Blog gị. "
Ọ bụ ezigbo echiche ịhazi mpempe akwụkwọ ndị a tupu oge – ọbụlagodi ọtụtụ ọnwa dị n’ihu – n’ihi na ha nwere ike ibute ọgbaghara n’okporo ụzọ ma yabụ n nwereọe naọọw n n n ik na.
Mən, ya-ame atụmatụ nke oge na mmalite nke afọ ma gbochie ụbọchị kalenda ịde ha, yana oge gị. Nye oge zuru oke iji mee ihe, dịka ị ga-amaghị ihe nwere ike ime ọtụtụ ọnwa site ugbu a: kalenda rụrụ arụ ka mma karịa ọ bụla kalenda ma ọlị.
Ọzọkwa, i njere oge iji chee echiche banyere ihe ndị ị na-eme ma jiri nlezianya jikọọ ha na ika gị, tinyere oge ọzọ itinye aka na nyocha na yochọta ebe iji jụọ ajụjụ ọnụ ogologo gogege oge. uru, dịka i nwere weghachite ntule bir ma ọ bụrụ na ihe mberede abịa.
Danny Garcia k ,wara, və:
Atụmatụ a na-arụ ọrụ na akwụkwọ ọ bụla ịchọrọ ibipụta, yabụ kpachara anya na ị na-eme atụmatụ ọtụtụ kalenda gị na mbido afọ, ma ọ bụ ọnwa 6 ọ bụla, ma pemọ bụa na , “Gbalịa lelee ọnwa na-abịa saytı ilə tanış olun. Oktyabr ayının 15-dən oktyabrın 15-dək. ”
Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Bloglar üçün bloglar (pulsuz)
Atụmatụ dị oke mkpa, mana ị gịgị eme ya niile aka! Enwere n’efu ma kwụọ ụgwọ ọrụ ị nwere ike iji rụọ ọrụ nke ọma iji mee ka ọrụ ntanetị gị rụọ ma debe ihe nile n’okpuru njikwa, nenenghị nchekasị.
Chris Brantner, CutCableToday.com saytına daxil olmaq üçün, ya da ngwá ọrụ ahọ:
N’oge gboo, agara m na CoSchedule jikwaa blọọgụ m, ọ bụ ihe kacha mma m nwetagoro. Ọ bụghị naanị na ọ na – enyere m aka ịhazi ọrụ dị mfe na ọtụtụ ndị edemede na ndị editọ, mana ọ na – enye m ohere ịnabata echiche site na mmalite ruo na ikenye mgbasa ozi mgbasa oza naụeba saytı. WordPress-də işləməyin.
Danny Garcia kwadoro ngwá ọrụ a maka atụmatụ nhazi, na Lori Soard’ın ya dịka otu n’ime 10 njikwa ngwaọrụ maka ndị na-ede blọgụ.
Vishnu dere ederede zuru ezu esi meziwanye nhazi akwụkwọ redaktə etmək ya da akwukwo pluginlər. Bu maka blọọgụ nke otutu ndi mmadu, mana nduzi nwere ike itinye aka na blọọgụ di na nwunye.
WordPress-də quraşdırılmış plaginlər:
Dezie Osimiri (saytı Vishnu na post ya da)
Danny Garcia na-atụ aro "ngwá ọrụ na njikọta (…) nke ga-eme ka usoro ịde blọgụ dị mfe," Orbis na Task Manager.
Elizabeth Carter a. Sọftụwia a. “Ọ bụ ihe dị mfe, igwe ojii na-agbasa ngwa ọrụ nke na-eme ka ọ dị mfe ịgafe mpaghara data gbasara gafee usoro usoro iji. Dịka ọmụmaatụ, mən ike inwe kalenda nna m ukwu n’otu akwụkwọ, wee jikọta ya na akwụkwọ mgbasa ozi dị iche na-esochi isi okwu, ndị na-ede akwụkwọ, onye na-ere ahịa n n nd n n n. Ọ bụ ihe na-ahụ anya, ọ dị mfe iso ndị otu m kerịta ihe, ma nwee obi ụtọ iji ya. ”
N’okwu Garcia, Hootsuite Facebook-da “ngwaọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ nke ga – enyere gị aka ịhazigharị ismarışları na Facebook. & Twitter-də bir az miqdarda mbbasa ozi-ejedebe na-eri ọtụtụ oge ”.
Lori Soard Hootsuite n’etiti 20 qəpik-enwe ngwaọrụ onye obte na onye ntanetiri giwesiri ijide n’aka.
Ndị mbido echiche bụ ndepụta nke ntinye ịde blọgụ iji mee ka ị bido ide ma zere ngọngọ onye edemede mgbe weg nweghị ike iwepụta isiokwu ma ọ bụ akụkụ iji dee banyere.
Lori Soard-a 20 mindən çox mesaj göndərə bilərik. 15 blog echiche generatorları ilə tanış olmaq üçün saytın nhazi ahụ ma malite ịmalite n’enweghị echiche iczọ.
N’ime ndụmọdụ Danny Garcia maka ịde blọgụ, Trello na-enweta ebe ya dị ka onye nhazi maka ọrụ na echiche. O gosiputara uzo “odi nkpa idetu ihe ndi a ma o bu na ha ha gha agafuru ha, ma o gha eme gi ahazi.”
Ọzọkwa, Trello nweere ya iji.
Nke a bụ ngwá ọrụ atụmatụ atụmatụ Julie Evald. Smartsheet bụ nchịkọta ọrụ nhazi nke ọrụ mgbasa ozi dịka nhazi nke na-eme ka onye ọrụ-enyi na enyi ma dị mfe iji.
$ 14 / on ọrụ / malnwa üçün malite ya da nifrət etmək lazımdır.
Ebe nrụọrụ weebụ a maara nke ọma "bụ ụzọ dị ukwuu iji hụ ihe na-agbanwe," ka Danny Garcia na-ekwu, "Yenə ị bụkwa nnukwu ngwaọrụ ịchọta ndị ga-enwe m blogị na blog gị."
Asana bụ mmemme na-ejikọta weebụ yana usoro nlekọta ọrụ maka ndị mmadụ na otu.
15, mgbe ahụ ọnụahịa na-amalite na $ 8.33 / onye ọrụ / wanwa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta onwe gị, PHP maka kalenda gị, PHP-Kalinda bụ kalịnda na-emeghe emeghe nke ọma ị nere ike ibudata ma wụnye na nkesa gị na ntakịrọ iheọọọọ.
Bipute Akwukwo Ntanetị na Ndepụta Ndepụta
Wtụtụ ihe dị n’ịntanetị n’efu, nke ndị na-ede blọgụ biiri ka ịchọrọ ịme ndụ nke ha (na ndị ọbịa) na-ebi ndụ ka mma.
StarAMomBlog.com saytından istifadə etmək üçün SMART blog məqsədlərini nedetu ederede obibi.
CoSchedule n’efu ndebanye kalenda ọdịnaya maka tutdu.
HubSpot nybanye ndebanye ederede nd ed edb na.
na, Pinterest nwere uktụtụ puku nhazi nhazi ịhọrọ saytı!
N’ezie, ya nepere ịmepụta usoro nchịkọta akụkọ nke na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na i chetara:
Mən mgbaru ọsị blog gị
Ebu ole ismarıclarını göndərin və ya neeziokwu n’otu ọnwa
Ego ole nepepe var
Atụmatụ dị na ọgụgụ isi ị gụrụ na ntụziaka a sitere na ndị na-ede blọgụ na ndị ahịa m gbara ajụjụ ọnụ, na ụfọdụ saytı na ahụmahụ onwe onye. Ụfọdụ nwere ike isonyere ọnọdụ g n, ndị ọzw nwere ike ọ bụghị, ma ebe ọ bụ na usoro nhazi blog bụ otu n’ime omume ndị ị na-amụta sayt na ikpe na njehie, m ka na-heheọịịụ ị nwere ike iji nyere aka Ghọta ihe na-arụ ọrụ maka gị ma gbagote gị onwe gị usoro ihe omume hacks.
Iji nwee ihega nke ọma, onye na-ede blog!
Blog i Ijikwa abụghị ọrụ dị mfe, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agbalịsi
مدونة Ijikwa abụghị ọrụ dị mfe، karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agbalịsi ike
Byl na-agbagharị blog gw nwa oge wee nwee ohere ịgwa ndị na-agụ akwụkwọ gị
Ijikwa blog abụghị ọrụ dị mfe, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agbalịsi ike ibipụta ihe ndị dị mma nke ndị na-agụ gị na-ahụ n’anya mgbe ị ghaghị ịmepụta oge iji zụụụ akụụụụụ gị na ebe ịntanetị, na ikekwe ọbụna bipụta otu ụlọ ọrụ ọbịa.
Y’oburu n’ibu ịmalite ọde blọgụ ma ọ bụ ịkwesịrị ịhapụ blog gị ka ọ jiri aka ya rụọ nwa oge, ihe niile a ga – eme nwere ike ịda.
Nke a na-abịa na nnapụta gị: ma ị bụ onye na-amaliet ma ọ bụ onye nchịkọta akụkọ, ọ ga-eduzi gị site na isi ihe nhazi nke blog iji nwee ike iwebata akwụkwọ ndị ọbịa na azii mg GI.
1.1 ‘N Na-ahazi nduzi en dị ka ndị a:
1.2 Gịnị blote blog ji eme atụmatụ dị nnọọ mkpa?
2.0.2 Jiri Kalinda Redaksioneel
3.0.2 Soro "muse" GI
4 3. ọnọgide Na-adịgide
7.1 Ọ bụrụ na Ị Chọrọ ‘n Blogger
9 Ngwaọrụ (Free na Ụgwọ) maka Blog na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
9.2 Na-emezi in WordPress
10 Wepụ ja
Ọ bụrụ na ịnweghị ike itinye ego ọzọ na ihe a, e nwere ọtụtụ ngwa ngwa ndị ị nwere ike ibudata na ekwentị gị ma ọ bụ kọmputa, kalenda dabeere na PHP nwere ike ịwụnye naụbeụọụ n’efu ị nwere ike ibipụta pụọ ​​ma jupụta n’aka.
Ozugbo i nwere ihe, ị nwere ek ịmalite ime atụmatụ.
‘N Na-ahazi nduzi en dị ka ndị a:
Ọnọgide na-agbanwe agbanwe
Gịnị blote blog ji eme atụmatụ dị nnọọ mkpa?
Ray Addison en RayAddisonLive.com bied ‘n nuwe boodskap aan na ‘n e-pos van ị ga-esi ahazi ya mepụta ya na blog ya. Mgbe o nyochachara ndụmọdụ nlekọta blog, ọ kpebiri ịde blog kwa izu ma gbalịa ịrapara na atụmatụ ahụ, na-ejikwa "ntinye akwụkwọ kwa ụbọchị dị ka mkpali maka ederede ọzọ m na-ede."
Addison mụtara na ọ dị oké mkpa ka ị "debe aha na nchịkọta akụkọ m ka m wee nwee oge ị ga-arụ ọrụ na imegharị ihe dịka mgbanwe mgbanwe m. Enwere m nnwere onwe nke idezi na offline na nke anya. M na-achọkwa eziokwu ahụ bụ na ọ dị mkpa na ị na-edepụta pụtara na m ga-aga n’ihu. "
EE, ntuziaka ị na-agụ bụ ihe niile gbasara ịghọ onye na – ede blọgụ dị egwu Cool, huh?
A oge njedebe bụ oge dị mma, oge na ụbọchị ịchọrọ ịnwe ọdịnaya gị ka ọ dịzie. Ọ bụrụ n ‘enweghị ahụ iru ala, ị nwere ike ịmegharị oge a dị mkpirikpi.
A oge nkpeazu siri ike bụ otu nke ị na-enweghị ike ịkwụsị, n’ihi na ọ na-efu ya ga-egbochi gị atụmatụ
B blogrụ onye blogger dma ma ma ka ka ọ dị nro na oge siri ike maka oge gị!
Elizabeth Carter, een van die jare negentig na Clariant Creative Agency, het die laaste twee jaar negentig jaar oud geword. Afọ nke ahụmahụ kụziiri ya na "enweh inwe usoro ịdekọ oge na-agaghị eme ka ị ghara ịde blog n’usoro."
E nwere ike ime atụmatụ kwa izu, kwa ọnwa, nkeji ọnwa ọ bụla, kwa ọnwa isii ma ọ bụ otu ugboro n’afọ. Carter na-enwetakarị nsonaazụ kachasị mma mgbe ọ na-echepụta kalenda ya site na nkeji iri na ise, mana "enwere m oge ụfọdụ na kalenda ọnwa kwa ọnwa" na "Enweghị m ike ịhazi usoro ihe ọ bụla na-erughi kwa ọnwa. Ndụ na – eme, na n’agbanyeghị ezigbo ebumnuche anyị, anyị na – arụsi ọrụ ike ma na – ede na ntinye akwụkwọ akụkọ ahụ ga – eme ka ọ daa n’ụzọ. Omume dị mfe nke ịmepụta blog ahụ ezubere wepụ ọtụtụ n’ime edemede nke ide akwụkwọ ahụ n’ezie, ebe ọ bụ na akụkụ siri ike – na – abịa na echiche – emeworịrịrị. "
Isetịpụ kalenda nkeji nkeji na-enye gị ohere ịlaghachi ma hụ nnukwu foto nke blog gị. O yikarịrị, ị na-agbazi ihe karịrị otu ụdị agụ. Ya blote, ị ga-achọ ijide n’aka na ị na-edozi ihe ndị ị na-edezi iji dozie nchegbu nke nke ọ bụla n’ime ndị na-ege gị ntị. O siri ike ime na nhazi oge nchịkọta oge, ma ọ dị mfe karịa mgbe ị na-elele anya ọnwa atọ.
Nke ahụ ga-adị mfe karị ma ọ bụrụ na ịchọta isiokwu 4 ma ọ bụ 5 na niche gị, ị nwere ike ịbanye na usoro nke posts, ya mere, ị nwere ike ịchọta ma nyochaa tupu oge ma mee ka dịu.
Stan Kimer, onyeisi oche nke Mkpokọta ejikọta ọnụ, malitere azụmahịa nke aka ya na di iche iche di iche iche na oru mmepe oru na 2010. Ọ na-eji ịde blọgụ iji gosipụta ihe ọmụma ya banyereh isiokw. "Ịrụ ọrụ ọrụ dị oke egwu. Ya mere, enweela m oge niile na ọde blọgụ ebe ọ bụ na 2010 na-aga – nke kachasị 2 ma ọ bụ 3 blọọgụ kwa ọnwa ma ọ na-adịkarị na-efu otu ọnwa. "
Ma ọ bụghị naanị banyere blog – e nwere akwụkwọ akụkọ ọ ga-elekọta, oke. "M na-ezipụ akwụkwọ akụkọ kwa ọnwa nke na-adọta okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ ahụ," ka Kimer na-ekwu, "net ‘n blog, jy hoef nie te blog nie, dan moet ek na ‘n e-posadres toe gaan. Anaghị m ebipụta ihe karịrị otu blog n’izu ọ gwụla ma m nwere ọnọdụ pụrụ iche. "
Onye edemede na ọkà okwu Joyce Kyles chatara ya mma blog kwa izu. Ndụmọdụ ya nuwe ndị na-ede blọgụ ọhụrụ bụ "ime ihe m kụziri dịka ike 90. Was 90 nkeji kwa ụbọchị ma lekwasị anya na otu oru. Ya mere, ugboro abụọ n’izu, Ana m etinye 90 nkeji nanị na-ede blọọgụ m, ma ọ bụrụ na ị na-eji WordPress, ị nwere ike ịhọrọ ụbọchị mbipụta. "
Gbaa nyocha weebụ maka "ntanetị weebụ nke na-enye gị ohere ịtinye okwu abụọ ma ọ bụ atọ ma mepụta isiokwu blog maka otu afọ maka n’efu" – na anyị nwere ọtụtụ ebe a na WHSR, oke! Lelee anya ntanetị nke anyị na ndị na-echepụta echiche na ndepụta nke ngwaọrụ atụmatụ na njedebe nke nduzi a.
Gebruik ‘n Facebook-profiel (na ‘n volledige weergawe van hierdie bladsy).
Matthew Gates, net soos jy Nkwupụta nke Ọrụ, na-atụ aro na ị ga-amalite, obere ma chọọ 1-2 poste, kwa izu ọ bụrụ na ị na-amaliet. "Ozugbo ị malitere ịmalite na-ewu ewu," ka ọ na-ekwu, "ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-enweta nkwanye ùgwù, ị ga-achọ maka ịkwado dịka usoro ene izu ọrụ nke 5 (MF). Ihe kacha mma ị ga – eme bụ ide ederede tupu ị gawa, [yabụ] emela ka ị na – edepụta ha. Dee ma ọ dịkarịa ala 10. Bido na-edepụta 1-2 [izu] otu izu, ma na-ede ma ọ dịkarịa ala 1-2 n’izu. "
Ogologo oge ị nwere ike itinye aka na ịde blọgụ na-adabere n’ogologo na nkọwa nke isiokwu gị, nri? Gates is ‘n maklike naam vir ‘n blote ogologiese oge:
"Ọ bụrụ na ịchọrọ ide ederede ogologo oge bụ okwu 2.000 ma ọ bụ kar mga, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịpụ na ịmepụta ụbọchị ole na ole n’izu. Ọ bụrụ na ị dee ederede mkpirikpi, n’etiti okwu 500-1000, mgbe ahụ, ọ ga-akacha mma ịmepụta ugboro ole n’izu. E nweghị n’ezie ma ọ bụ ihe ọjọọ, mana ọ bụrụ na ị na-ezite otu ugboro n’izu ma ọ bụ otu ugboro n’ọnwa, blog gị ga-ahụ ndị nwụnahụrụ, ndị ọbịa ga-abụkagh nai agagh. "
Echiche Gates bụ na blọọgụ kwesịrị ịdị “ka ọ dị ndụ” dị ka o kwere mee, yabụ ibipụta akwụkwọ ole na ole kwa izu ga-abụ nhọrọ ka mma (ma ọ bụrụ na ị nwere akụ) karịa naaniz. "Mana ọzọ, n’ịkwadebe maka ọnọdụ mberede ndị ahụ, ọ ka mma ide banyere isiokwu 10 tupu oge eruo, ma nwee ọ dịkarịa ala 3 maka nkwado ndabere, ọ bụrụ na ị nweta ngikechọe ọ bụ ole na ole. Izu. “
Jiri Kalinda Redaksioneel
Nye Julie Ewald, blog op die blog na ọdịnaya ndị dị na Nchọpụta Impressa, kalenda akụkọ nwere ike gbanwee atụmatụ blog ka ọ bụrụ ihe ịga nke ọma, ị chọghịkwa sọftụwia na-atọ ụ na "enwere ike ịme ya nke ọma site na iji akwụkwọ ntụgharị (m na-eji Smartsheet) ma ọ bụ na kalenda Google."
Ewald na-atụ aro ka ị "lee ma ọ dịkarịa ala ọnwa abụọ n’ọdịnihu. N’ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịnweta nlezianya dị mma nke ọtụtụ poste ị ga – emerịrị na oge etinyere, ma nwee ike ịmepụta (ma rụọ ọrụ na n’ihu) poste na ọdịnaya ogzi ma na- ahịa ndị ọzọ. Ma ọ bụghị ya, wnwere ike ịchọta onwe gị iji mepụta posts na oge-ma ọ bụ enweghị ihe ọ bụla ị ga-etinye ma ọ bụrụ na i nwebeghị ihe ọ bụla ma ọ bụ nwee ihe mberede. "
Ị ga-ahụ ndepụta nke ederede kalenda ederede na ngwaọrụ ndị ọzọ na njedebe nke post a.
‘N Koppie tii, ihe ole na ole na-agbaji, ‘n obere mmega ahụ, egwú dị nro na, nke kachasị mkpa, ‘n echiche ziri ezi nwere ike niile aka gị mpaghara na, na ọ bụrụ na ị na-enwe mgbagwoju anya, enwere ihe ole na ole i nwere ike ịnwale iji nyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị.
Ị ga-enwe maasị ọde blọgụ azụmahịa dị ka a ga-asị na ọ bụ akwụkwọ akụkọ onwe gị iji mejupụta echiche gị nke ọma ma nọgide na-aga.
Ma nke ahụ abụghị ihe niile gbasara arụpụta ihe. Ị ga – achọpụta ihe ndị ọzọ n’èzí.
Dave Hermansen, 13+ na-azụ ahịa na-azụ ahịa e-handel na Store Coach, Inc., na-eche ụzọ kachasị mma iji nọgide na-enwe echiche na-agbanwe agbanwe mgbe nile nke na-asọba, ọ dịghịkwa mgbe ọ na-apụ na ntinye ederede bụ:
Soro dị ka ọtụtụ blọọgụ metụtara dịka in nwere ike. Ha nwere ike ịbụ i mgbagwoju anya nke sitere n’ike mmụọ nsọ. Debanye na ndepụta RSS nke blọọgụ ọ bụla metụtara gị niche. Kọọrọ onwe gị nchịkọta nke ụfọdụ n’ime isiokwu ndị dị mma ọbụna na-enweghị njikọ na niche gị. Jiri ha dị ka mmụọ nsọ maka ụfọdụ n’ime ihe ị nwere ike ide banyere. Kesaa ọtụtụ n’ime ezigbo isiokwu ịchọtara na netwọk mmekọrịta gị, mana chekwaa di na nwunye na ebe a dị ka echiche maka ihe ndị ị nwere ike idere nke gị.
Ịtụle isiokwu dị iche iche ma na-ele ha anya site na nkuku ọhụrụ, na ịmegharị ihe ochie gị ma ọ bụ poste ndị ọbịa bụ ihe niile a maara nke ọma na akụkọ nta akụkọ nke na-arụọ am am am.
Soro "muse" GI
Atụmatụ dị oke mkpa, ma hapụ ma ọ dịkarịa ala ụbọchị ole na ole n’izu ebe i nwere ike "na-aga na mmiri ahụ" ma na-enwe obi ụtọ na blog gị. Ide ihe mgbe ị na-enwe mmetụta sitere n’ike mmụọ nsọ site na "ime ihe" gị ga-eme ka ị zere iwe ọkụ ma nyere gị aka ịmepụtakwu echiche maka blog banyere ọdịnihu.
Mgbe m na-enwe mmetụta dị oke ihe na dị ka ide ihe, enwere m ike ide 2 ma ọ bụ 3 blọọgụ n’otu nnọkọ ka m wee nwee ole na ole n’ime pyplyn dị njikere ịga. Mgbe ụfọdụ m nwere echiche maka blog nke ga-adị ogologo, n’ihi ya, m ga-eme usoro 2 ma ọ bụ 3.
Ọ bụrụ na m gaa ogbako na-adọrọ mmasị ma ọ bụ nzukọ na mpaghara ndị m na-achọ, m ga-ede blog ma ọ bụ abụọ maka ya. Dịka ọmụmaatụ, mgbe m gara Noord-Carolina SHRM (Society of Human Resource Conference), [mgbe ahụ na ngwụcha izu] m debere mpempe abụọ abụọ maka okwu abụọ bụ isi nke m ga-ebipụta n’oge a [n’ọnwa].
Ọzọkwa, ọ bụrụ na m na netwọk na onye na-adọrọ mmasị ma ọ bụ azụmahịa, nke ahụ ga-enye m echiche maka blog, [ma] ọ bụrụ na m nweta ụfọdụ echiche maka blog m ga-edeba ya, n’ih ya, echefughị ​​m ya.
3. ọnọgide Na-adịgide
Inwe atụmatụ na kalenda nwere ike inyere gị aka ịnọgidesi ike na ma mma.
Danny Garcia kwenyere na “ọ dị mkpa ịnweta atụmatụ ọdịnaya ma rapara na ya. Otu isi ihe dị na ndụmọdụ mmadụ nile na-enye ndị na-ede blọgụ bụ ịnọgidesi ike. Ọ baghị uru ọ bụla oge ị na – ezisa ma ọ bụrụhaala ndị na – agụ akwụkwọ gị mara ugboro ole ị na – ede biputere ma rapara na nke ahụ. Aga m ekwu na ugboro ugboro adịghị mkpa ka ọrụ mma, mana ịnwe opekata mpe akwụkwọ ọnwa abụọ ọ dị mma. “
Garcia na-ekwupụta etu ọ dị mma karịa ọtụtụ mgbe ọ na-abịa ịde blọgụ, n’agbanyeghị ugboro ole n’izu ma ọ bụ ọnwa ị na-ebipụta. Ụ rụtụrụ ook bekend as ‘n ma ama:
U het ‘n negatiewe weergawe van die blog op ‘n blog (deur Neil Patel, wat deur Seth Godin is) na ‘n blog op die webwerf van gburugburu ugboro in die wêreld (Mark Manson en Ryan Ezumike). Ha niile nwere nnukwu ndị na-ege ntị, ọ bụghị dabere na ugboro ole ha na-arụ ọrụ, kama n’ihi àgwà ha.
Stan Kimer na-agbasi mbọ ike "ntanye 2 ma ọ bụ 3 blọọgụ n’ihu usoro," jy is net ike "inwe d ie neikere ma ọ bụrụ na m banye n’oge kachasị oge ma ọ bụ oge siri ike (ma ọ bụ ọbụna gaa ezumike!)."
A bịa n’ụdị poste ịchọrọ ịgbakwunye na kalenda, yana ole, Julie Ewald na-atụ aro ka ị “nyochaa ebumnuche gị, nd n na-ege gị ntị, na oge ole (ma ọ bọ ego)) nwere ike itinyeị na blọọọọ . E kwesiri inwees post obula n’otu n’otu na agwa ndi nile n’eji okwu okwu okwu n’onwe ha n’uzo iji mezuo ebumnuche gi obula ma obu ihe i na ere ugbu a. Ee, e kwesịrị inwe nnyochi ebe a. “
Ewald na-atụ aro ka ị wepụta 4-na-6 poste kwa ọnwa, ma ọ bụ 2 kwa izu, dịka opekempe, ma n’ikpeazụ, ị nwere ike ịga na nọmba ọ bụla ruo mgbe ị na-anọgidesi ike n’usoro oge ezipụ gị.
Mee ohere maka akwụkwọ ndị ọbịa na kalenda gị – ha adighi obere karịa poste gị, ha na – enyere aka ịkwalite blog na nka gị.
Danny Garcia, njikwa njikwa ahịa na Stacklist.com, na-ekwu na “ikenye ndị ọbịa na-ekpughere gị ndị na-ege ntị ọhụrụ ma na-enye saịtị gị ihe njikọ bara uru, yabụ zere iwe iweụ, ma ọ b na-ebute ụzọ idebanye ọbịa ma ọ bụ wepụta onwe gị (ọ bụrụ na enyeghị gị gị) nke ahụ kwesịrị inyere aka. “
Garcia chọpwetakwara, “Inwe usoro ide in die na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ nke ọma. Achọpụtara m na m bụ onye okike kachasị ọhụrụ mgbe m tetara n’ụtụtụ wee dee maka wag 2 tupu ihe ndọpụ uche ọ bụla abanye n’ụzọ. Mgbe enwere ọtụtụ ihe ị ga – ede, ide ihe na – arụ ọrụ nke ọma, nke na – abụkarị ihe na – akpata iwe ọkụ. “
Nh ahụ bụ:
Was ọnụọgụ ahụ wee mee 2 n’ime poste ndị ọbịa ahụ. Ọ bụ ezigbo iwu nke isi mkpisi aka ka itule idozi mbọ gị iji zere ma ọ bụ leda anya.
Dịka ọmụmaatụ, oge ntanetịime m na ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa ndị m nwere ike ide na otu ọnwa kwesịrị iji ihe mgbu ederede 1.000 – 1.500 mee kwa ụbọchị. Ịgbalị imekwu ihe ga-emerụ ahụike uche m ma tụfuo oge dum, ya mere, iwebata nke ndị ọbịa ga-abụ nke ọma na nke ọma.
Wmụ wakker Palmer na-echetara, sị, "Iwepụ ndị ọbịa bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-eto eto." Ọ na-ekwu na nke a bụ eziokwu karịsịa maka ndị na-ede blọgụ ọhụrụ, ma kwado ka ị "bipụtara ọdịnaya gị n’otu ugboro n’izu. Mgbe ahụ, ọ ga-eziga otu onye n’izu n’izu. "
Don’tchọghị imefusị oge ị na-eji zụọ ahịa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ka ị chọghị ka ọ rie ya oge edere.
Ị nwere ike mezuo nke a na minit 30 kwa izu ma ọ bụ obere, ma ọ bụ ị nwere ike ịgbaso atụmatụ My Palmer:
70% nke mbak gị kwesịrị ka a kọọ – m na-ekwu maka retweets, foto / re-share, na ihe ndị na-atụ n’anya na ị gbakwunye lil ‘somethin’ kwa.
20% nke plasings vir nwere ike ịbụ [ọdịnaya] ị kere – Ụlọ ọrị blog vir naatụmatụ ndị ọbịa.
10% (na naanị 10%) nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi gị kpọmkwem – Njikọ gị na onyinye gị, asọmpi ị chọrọ nkwado na, usoro ma ọ bụ ịmalite ịmalitere, webinars, wdg.
Ndị na-ege ntị na-etoliet mgbe a na-ere ahịa. Ike.
Kedu ihe ị ga – eme ma ọ bụrụ na ịnwe ọnọdụ mberede na ụbọchị ịchọrọ? Ma kedu ka ị ga – esi mee ka echiche ‘jupụta’ mgbe niile mgbe ọ dị gị ka ihe ọ jouụ kreatiefụ okike gị agwụla?
Inwe oge dị nro ma sie ike ga – enyere gị aka ma ọ bụrụ na ị rịa ọrịa ma ọ bụ nwee ihe mberede, ma gị na ndị na – agụ akwụkwọ gị okwu bụ isi – ọ bụrụ na ịnweghị ike ijigide nk eme ka ha mara ma ọ bụ na ị ga – emechu ha ihu ma okporo ụzọ gị ga – ada .
Danny Garcia kpọrọ nchịkwa mmebi.
Ọ nwere ike ịdị mfe dịka ime ka ndị na – agụ akwụkwọ gị mara maka ya na ọwa na – elekọta mmadụ mgbasa ozi gị, nke mere na a na – agwa ha ya. Iji mee ka echiche ahụ jupụta mgbe niile, ị ga-agụ karịa ka ị na-ede. Ek het enigiemand nodig om dit te doen. Ichoro otutu uzo di iche iche iche maka edemede gi obula.
Kan nike iji iji otu izu gụọ akwụkwọ naanị iji nweta ahịrịokwu ole na ole na ya na ederede gị, ọ bụ ya blote o ji dị mkpa ịgụ ọtụtụ ihe. Chọrọ ọtụtụ isi mmalite en iche ich maka ozi / mmụọ. N’akwụkwọ, o nweghị uru ọ bara, mana ọgụgụ akwụkwọ na-eweta ihe ọmụma ma na-akpali imepụta ihe.
Kwa ọnwa, m na-anọdụ ala ma depụta ihe m chọrọ iji mezuo maka ọnwa ahụ. Ek wil graag ‘n boodskap hê, en ek wil dit graag doen, maar dit is ‘n boodskap van ‘n blog blog na ‘n X-weergawe ‘,’ ” ” ” ” ” ” ” = ” ” ” ”. Mgbe nke a gasịrị, m ga-agbaji ha n’ime ihe a ga-eme kwa izu.
Mgbe nsogbu mberede bilitere, enwere m ike ịnabata ya n’ime usoro ịde blọgụ m n’ebughị nsogbu. Amaara m kpọmkwem ihe m kwesịrị ime maka izu ahụ, ọ bụrụ na m daa azụ ruo ụbọchị ole na ole, amaara m na aghaghị m ịchọta mgbe e mesịrị.
Ọ bụrụ na m eme atụmatụ kpọmkwem ihe m ga-eme maka ụbọchị ọ bụla, enwere m ike nrụgide na-agbalị ịnwa "mgbe niile" na-arụ ọrụ. Achọpụtala m na ọ na-esiri m ike imezu oge a na-eme kwa ụbọchị, n’ihi na enwere mberede na mberede na-eme, n’ihi ya, m na-etinye kwa izu kwa ọnwa.
Ụmụnna Palmer, uitvoerende hoof van MysPalmer.com, maar net na nd-na-eme ma ị gaghị is soos izere ya mgbe ọ bloot, yabụ “ịhazi ọdịnaya gị otu izu tupu ene eruo na-elekọta ya. Needchọghị ịma mma. Banye na Hootsuite ma jiri ndị bipụta akwụkwọ lee izu na-abịa. Pịa oge, họrọ netwọk na nhazi oge. “
Ka o sina dị, ị gaghị na-emesi ya ike. Julie Ewald kwuru, sị: “Ọ bụrụ na ị ga-efu isi ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe ọzọ, awusi ya. “Ek is nog nie so goed nie. Ọ bụrụ na ị na-eme ụdị mbọ SEO ọ bụla, ị ga-ahụ mbiara okporo ụzọ na ọkwa dị elu ma ọ bụrụ na ị tigharịa kpam kpam. “
Ọ bụrụ na Ị Chọrọ ‘n Blogger
Nick Brennan, onye nchoputa na onye isi nke Lelee Social Media, na-ekwu, sị: "E ngere igodo atọ iji hazie ma ọ bụr a na a na-edezi" na ị nwere onye ọzọ na-arụ ọrụ maka gị:
1. Akwukwo ọdịnaya di elu nke ebe ichoro ihe obula i choro ibi ndu kwa izu – uzo di nfe / akwukwo di nkpa, ihe di iche ich nke edere ya na onye obula na nke ozo, wdg.
"Ọ bụrụhaala na ị nwere akwụkwọ edemede siri ike na ihe ndị a," ka Brennan na-agbakwụnye, "ìgwè gị ekwesịghị inwe nsogbu ịmepụta ọdịnaya dị mma webwerf na mgbe niile."
Enigiemand wat van die WHSR ‘n maka is, en dit is edemede na ị nwere ike ịgụ: "Blogger-werf na redaksionele redakteur: Ndị edemede edemede maka Blog gị. "
Ọ bụ ezigbo echiche ịhazi mpempe akwụkwọ ndị a tupu oge – ọbụlagodi ọtụtụ ọnwa dị n’ihu – n’ihi na ha nwere ike ibute ọgbaghara n’okporo ụzọ ma yabụ ị najik.
Ek kwesiri, ị ga-eme atụmatụ nke oge oge na mmalite nke afọ ma gbochie ụbọchị kalenda ịde ha, yana oge gị. Nye oge zuru oke iji mee ihe, dịka ị ga-amaghị ihe nwere ike ime ọtụtụ ọnwa webwerf ugbu a: kalenda rụrụ arụ ka mma karịa ọ bụla kalenda ma ọlị.
,Zọkwa, i nere ene iji chee echiche banyere ihe ndị ị na-eme ma jiri nlezianya jikọọ ha na ika gị, smallere oge ọzọ itinye aka na nyocha na ịchọta ebe iji jụọ ajụjụ ọnụ ogologo ogeal mmi uru, ek wil nie anders as ‘n ma ọ bụrụ na die mberede abịa nie.
Atụmatụ a na-arụ ọrụ na akwụkwọ ọ bụla ịchọrọ ibipụta, yabụ kpachara anya na ị na-eme atụmatụ ọtụtụ kalenda gị na mbido afọ, ma ọ bụ ọnwa 6 ọ bụla, ma ọ na ka ka opata , “Gbalịa lelee is ‘n webwerf vir ‘n webwerf wat ‘n gara aga is. Kwadebe oge mkpado nke ọnwa November webwerf tot 15 nke Oktober. “
Ngwaọrụ (Free na Ụgwọ) maka Blog na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Atụmatụ dị oke mkpa, mana ị gaghị eme ya niile aka! Enwere n’efu ma kwụọ ụgwọ ọrụ ị nwere ike iji rụọ ọrụ nke ọma iji mee ka ọrụ ntanetị gị rụọ ma debe ihe nile n’okpuru njikwa, n’enweghị nchekasị.
Chris Brantner, net soos jy CutCableToday.com het, moet jy na ‘n nuwe naam kyk:
N’oge gboo, agara m na CoSchedule jikwaa blọọgụ m, ọ bụ ihe kacha mma m nwetagoro. Ọ bụghị naanị na ọ na – enyere m aka ịhazi ọrụ dị mfe na ọtụtụ ndị edemede na ndị redigering, mana ọ na – enye m ohere ịnabata echiche site na mmalite ruo na ikenye mgbasa ozi mgbasa ozi natuụụ elash mm mm nke agbakwunyere na WordPress.
Danny Garcia kwadoro ngwá ọrụ a maka atụmatụ nhazi, na Lori Soard depụtara ya dịka otu n’ime 10 nikwa ngwaọrụ maka ndị na-ede blọgụ.
Na-emezi in WordPress
Vishnu dere ederede zuru ezu esi meziwanye nhazi akwụkwọ edetu ya na akwukwo plugins. Ihe edere bu maka blọọgụ nke otutu ndi mmadu, mana nduzi nwere ike itinye aka na blọọgụ di na nwunye.
As u die plugins vir WordPress gebruik, word WordPress-programme geskep:
Dezie Osimiri (nuutste webwerf Vishnu na post ya)
Danny Garcia na-atụ aro "ngwá ọrụ na njikọta (…) nke ga-eme ka usoro ịde blọgụ dị mfe," deur Orbis na taakbestuurder.
Elizabeth Carter tụrụ aro sọftụwia a. “Ek het gedaan, ek sal na die agbasa ngwa of die na-eme ka ọ dị mfe ị gafe mpaghara gegewens gee ons usoro usoro iji. Dịka ọmụmaatụ, enwere m ike inwe kalenda nna m ukwu n’otu akwụkwọ, wee jikọta ya na akwụkwọ mgbasa ozi dị iche na-esochi isi okwu, ndị na-ede akwụkwọ, onye na-ere ahịa n. Ọ bụ ihe na-ahụ anya, ọ dị mfe iso ndị otu m kerịta ihe, ma nwee obi ụtọ iji ya. “
N’okwu Garcia, Hootsuite bụ “ngwaọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ nke ga – enyere gị aka ịhazigharị posts op Facebook & Twitter ka ahịa mgbasa ozi na-ejedebe na-eri ọtụtụ oge ”.
Ndị mbido echiche deur ndepụta nke ntinye ịde blọgụ iji mee ka ị bido ide ma zere ngọngọ onye edemede mgbe ị nweghị ike iwepụta isiokwu ma ọ bụ akụkụ iji dee banyere.
Lori Soard is 20 mm op die oomblik nadat ek 15 blog-generators op die blog geplaas het, en dit is ‘n webwerf wat na ‘n maliteit is, maar dat dit ‘n maliet is en ‘n ‘n ‘weg’ echiche ọzọ.
N’ime ndụmọdụ Danny Garcia maka ịde blọgụ, Trello na-enweta ebe ya dị ka onye nhazi maka ọrụ na echiche. O gosiputara uzo “odi nkpa idetu ihe ndi a ma o bu na ha gha aghafuru ha, ma o gha eme gi ahazi.”
Ọzọkwa, Trello nweere onwe ya iji.
Enwere ike ịnwale ngwá ọrụ ahụ n’efu ma ahịa malite tot $ 14 / on ọrụ / ọnwa.
Ebe nrụọrụ weebụ ‘n maara nke ọma "bụ ụzọ dị ukwuu iji hụ ihe na-agbanwe," ka Danny Garcia na-ekwu, "yana ọ bụkwa nnukwu ngwaọrụ ịchọta ndị ga-enwe mmasị na blog gị."
O nweere onwe gị iji ndị otu otu 15, mag uhụ ọnụahịa na-amaliet tot $ 8,33 / onye ọrụ / ọnwa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta onwe gị, ngwọta dabeere na PHP maka kalenda gị, PHP-Kalinda bụ kalịnda na-emeghe emeghe nke ọma ị nwere ike ibudata ma wụnye na nkesa gị na ntakịrị ihe achọr.
Enwere ọtụtụ ihe dị n’ịntanetị n’efu, nke ndị na-ede blọgụ biiri ka ịchọrọ ịme ndụ nke ha (na ndị ọbịa) na-ebi ndụ ka mma.
Soek na StarAMomBlog.com na-enye en ek SMART-blogdoelwitte ndetu ederede obibi.
CoSchedule nwere n’efu ndebanye kalenda ọdịnaya maka gryp.
na, Pinterest’s ‘n webwerf vir die webblad van die webwerf op die webwerf!
N’ezie, wnwere ike ịmepụta usoro nchịkọta akụkọ nke na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na i chetara:
Ihe mgbaru het blog blog
Ebu ole poste ị nwere ike dee n’eziokwu n’otu ọnwa
Ego ole ị nwere ike ịmepụta
Atụmatụ dị na ọgụgụ isi ị gụrụ na ntụziaka a sitere na ndị na-ede blọgụ na ndị ahịa m gbara ajụjụ ọnụ, na ụfọdụ site na ahụmahụ onwe onye. Ụfọdụ nwere ike isonyere ọnọdụ gị, ndị ọzọ nwere ike ọ bụghị, ma ebe ọ bụ na usoro nhazi blog bụ otu n’ime omume ndị ị na-amụta webwerf na ikpe na njehie, m ka na-akpọọịịịị ị nwere ike iji nyere aka ghọta ihe na-arụ ọrụ maka gị ma gbagote gị onwe gị usoro ihe omume hacks.
Ek het nog geen lid van die blog nie!
Blog i Ijikwa abụghị ọrụ dị mfe, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agbalịsi ike ibipụta ihe ndị dị mma nke ndị na-agụ gị na-ahụ n’anya mgbe ị Ghaghị ịmepụta oge iji zụlite ngkọọ naka gị na ebe ịntanetị, na ikekwe ọbụna bipụta otu ụlọ rụ ọbịa.
Nke a na-abịa na nnapụta gị: ma ị bụ onye na-amalite ma ọ bụ onye nchịkọta akụkọ, ọ ga-eduzi gị site na isi ihe nhazi nke blog iji nwee ike iwebata akwụkwọ ndị ọbịa na aaịa mg të miratuara nga qeveria.
1.1 Një na-ahazi nduzi a dị ka ndị a:
1.2 Gịnị thjesht Blog nga eme atụmatụ dị nnọọ mkpa?
2.0.1 Malite obere, ma gbalịsie ike na-ele "gjithsesi ndụ"
2.0.2 Redaksia Jiri Kalinda
3.0.2 Soro "muzë" të miratuara nga qeveria
5 4. Na-eme ka ndị ịbịa banye n’ime oge gị
5.0.1 Ego ole ka ị ga-ede n’eziokwu na otu wanwa?
7.1 Ọ bụrụ na Ị Chọrọ Një Blogger
9 Blog (Makina Falas Bloggw) Blog për Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
9.2 Na-emezi ihe na WordPress
9.5 Ndihmoni me Ide të gjeneratorëve
Ọ bụrụ na ịnweghị ike itinye ego ọzọ na ihe a, e nwere ọtụtụ ngwa ngwa ndị ị nwere ike ibudata na ekwentị gị ma ọ bụ kọmputa, kalenda dabeere na PHP nwere ike ịwụnye na ebe naendata n’efu ị nwere ike ibipụta pụọ ​​ma jupụta n’aka.
Ozugbo i nwere ihe, ị nwere ike ịmalite ime atụmatụ.
Një na-ahazi nduzi a dị ka ndị a:
Tinye njikọ ndị ịbịa n’ime oge gị
Gịnị thjesht Blog nga eme atụmatụ dị nnọọ mkpa?
Ray Addison si RayAddisonLive.com bụ onye nchịkọta ọhụrụ nke nọ na-eche otú ga-esi ahazi ya ma mepụta ya na blog ya. Blog Mgbe o nyochachara ndụmọdụ nlekọta, ọ kpebiri blogde blog kwa izu ma gbalịa ịrapara na atụmatụ ahụ, na-ejikwa "ntinye akwụkwọ kwa ụbọchị dị ka mkpali maka ederede ọzọ m na-ede."
Addison mụtara na ọ dị oké mkpa ka "debe aha na nchịkọta akụkọ m ka m wee nwee oge ị ga-arụ ọrụ na imegharị ihe dịka mgbanwe mgbanwe m. Enwere m nnwere onwe nke idezi na offline na nke anya. M na-achọkwa eziokwu ahụ bụ na ọ dị mkpa na ị na-edepụta pụtara na m ga-aga n’ihu. "
Nabata kalịnda gị ma gbochie ọrụ gị, oge na ọrụ ndị ọzọ dị mkpa ị ga – ebute ụzọ n’izu maọbụ wanwa.
Ndụmọdụ m dị ka onye na-ede blọgụ na ọtụtụ nsogbu ahụike bụ yenye onwe gị otu nro na otu njedebe siri ike:
Blogger Bụrụ onye dị mma ma mee ka ọ dị nro na oge siri ike maka oge gị!
Ịrụ ọrụ oge nkwụsị na nke siri ike ga-enye gị ohere zuru oke iji nweta nchọpụta, ide na idezi ndụ ma ọ bụ ọrụ azụmahịa ndị zọ na-enweta n’ụzọ nke oge gị. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ na-enyere gị aka ịnọ na egwu.
Elizabeth Carter, onye isch nkịkwa na Clariant Agjensi Krijuese, e keqe dhe nga vitet 2000 të mmalite. Afọ nke ahụmahụ kụziiri ya na "enweghị inwe usoro ịdekọ oge na-agaghị eme ka ị Ghara ịde blog n’usoro."
E nwere ike ime atụmatụ kwa izu, kwa ọnwa, nkeji ọnwa ọ bụla, kwa ọnwa isii ma ọ bụ otu ugboro n’afọ. Carter na-enwetakarị nsonaazụ kachasị mma mgbe ọ na-echepụta kalenda ya site na nkeji iri na ise, mana "enwere m oge ụfọdụ na kalenda wanwa kwa ọnwa" na "Enweghị m ike ịhazi usoro ihe ọ bụla na-erughi kwa ọnwa. Ndụ na – eme, na n’agbanyeghị ezigbo ebumnuche Anyị, anyị na – arụsi ọrụ ike ma na – ede na ntinye akwụkwọ akụkọ ahụ ga – eme ka ọ daa n’ụzọ. Omume dị mfe nke blogmepụta blog ahụ ezubere wepụ ọtụtụ n’ime edemede nke ide akwụkwọ ahụ n’ezie, ebe ọ bụ na akụkụ siri ike – na – abịa na echiche – emeworịrịrị. "
Isetịpụ kalenda nkeji nkeji na-enye gị ohere ịlaghachi ma hụ nnukwu foto nke blog gị. O yikarịrị, ị na-agbazi ihe karịrị otu ụdị agụ. Ya thjesht, ị ga-achọ ijide n’aka na ị na-edozi ihe ndị ị na-edezi iji dozie nchegbu nke nke ọ bụla n’ime ndị na-ege gị ntị. O siri ike ime na nhazi oge nchịkọta oge, ma ọ dị mfe karịa mgbe ị na-elele anya ọnwa atọ.
Nke ahụ ga-adị mfe karị ma ọ bụrụ na ịchọta isiokwu 4 ma ọ bụ 5 na niche gị, ị nwere ike ịbanye na usoro nke postime, ya mere, we nwere ike ịchọta ma nyochaa tupu oge ma mee ka.
Stan Kimer, onyeisi oche nke Mkpokọta ejikọta ọnụ, malitere azụmahịa nke aka ya na di iche iche di iche iche na oru mmepe oru na 2010. Ọ na-eji ịde blọgụ iji gosipụta ihe ụmụma ya banyere isiok. "Ịrụ ọrụ ọrụ dị oke egwu. Ya mere, enweela m oge niile na ịde blọgụ ebe ọ bụ na 2010 na-aga – nke kachasị 2 ma ọ bụ 3 blọọgụ kwa ọnwa ma na-adịkarị na-efu otu wanwa. "
Ma Ma bụghị naanị banyere blog – e nwere akwụkwọ akụkọ a ga-elektrọta, oke. "M na-ezipụ akwụkwọ akụkọ kwa ọnwa nke na-adọta okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ ahụ," ka Kimer na-ekwu, "ya mere, anaghị m ebipụta blog n’otu izu nke ọnwa ahụ m na-ezipụ akwụkwọ akụkọ. Anaghị m ebipụta ihe karịrị otu blog n’izu ọ gwụla ma m nwere ọnọdụ pụrụ iche. "
Malite obere, ma gbalịsie ike na-ele "gjithsesi ndụ"
Onye edemede na okkà okwu Joyce Kyles chọtara ya mma blog kwa izu. Ndụmọdụ ya nye ndị na-ede blọgụ ọhụrụ bụ "ime ihe m kụziri dịka ike 90. Ishin 90 nkeji kwa ụbọchị ma lekwasị anya na otu oru. Ya thjesht, ugboro abụọ n’izu, Ana m etinye 90 nkeji nanị na-ede blọọgụ m, ma ọ bụrụ na ị na-eji WordPress, we nwere ike ịhọrọ ụbọchị mbipụta. "
Gbaa nyocha weebụ maka "ntanetị weebụ nke na-enye gị ohere tinye okwu abụọ ma ọ bụ atọ ma mepụta isiokwu blog maka otu afọ maka n’efu" – na anyị nwere ọtụtụ ebe a na WHSR, oke! Lelee anya ntanetị nke anyị na ndị na-echepụta echiche na ndepụta nke ngwaọrụ atụmatụ na njedebe nke nduzi a.
Matthew Gates, onye nwe ya Nkwupụta nke ụrụ, na-atụ aro na ị ga-amalite obere ma chọọ 1-2 postime k iz izu ọ bụrụ na ị na-amalite. "Ozugbo ị malitere ịmalite na-ewu ewu," ka ọ na-ekwu, "ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-enweta nkwanye kgwù, ị ga-achọ maka ịkwado dịka usoro oge izu ọrụ nke 5 (MF). Ihe kacha mma ị ga – eme bụ ide ederede tupu ị gawa, [yabụ] emela ka ị na – edepụta ha. Dee ma ọ dịkarịa ala 10. Bido na-edepụta 1-2 [izu] otu izu, ma na-ede ma ọ dịkarịa ala 1-2 n’izu. "
Ogologo oge ị nwere ike itinye aka na ịde blọgụ na-adabere n’ogologo na nkọwa nke isiokwu gị, nri? Gates nwere ndụmọdụ maka ndị na-ede blọgụ ogologo oge:
"Ọ bụrụ na ịchọrọ ide ederede ogologo oge bụ okwu 2,000 ma ọ bụ karịa, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịpụ na ịmepụta ụbọchị ole na ole n’izu. Ọ bụrụ na ị dee ederede mkpirikpi, n’etiti okwu 500-1000, mgbe ahụ, a ga-akacha mma ịmepụta ugboro ole n’izu. E nweghị n’ezie ma ọ bụ ihe ọjọọ, mana ọ bụrụ na ị na-ezite otu ugboro n’izu ma ọ bụ otu ugboro n’ọnwa, blog gị ga-ahụ ndị nwụnahụrụ, ndị ịbịa ga-abụwa. "
Echiche Gates bụ na blọọgụ kwesịrị ịdị “ka ọ dị ndụ” dị ka o kwere mee, yabụ ibipụta akwụkwọ ole na ole kwa izu ga-abụ nhọrọ ka mma (ma ọ bụrụ na n nwere akụ) kar’. "Mana ọzọ, n’ịkwadebe maka ọnọdụ mberede ndị ahụ, ọ ka mma ide banyere isiokwu 10 tupu oge eruo, ma nwee ọ dịkarịa ala 3 maka nkwado ndabere, ụ bụrụ na ịnweta ngedee weneịeị ọ bụ ole na ole. Izu. “
Redaksia Jiri Kalinda
Nye Julie Ewald, on-na-ede blog na ọdịnaya ndị dị na Nchọpụta Impressa, kalenda akụkọ nwere ike gbanwee atụmatụ blog ka ọ bụrụ ihe ịga nke kema, ị chịghịkwa sọftụwia na-atọ ụtọ, "enwere ike ịme ya nke sitema site na iji akwụkwọ ntụgharị (m na-eji Smartsheet) ma ọ bụ na kalenda Google."
Ewald na-atụ aro ka "lee ma ọ dịkarịa ala ọnwa abụọ n’ọdịnihu. Poste n’ụzọ dị otú a, we nwere ike ịnweta nlezianya dị mma nke ketụtụ postime posts ga – emerịrị na oge etinyere, ma nwee ike ịmepụta (ma rụọ ọrụ na n’ihu) postime na ọdịnaya oge ma ịal ahịa ndị ọzọ. Ma ọ bụghị ya, wenwere ike ịchọta onwe gị iji mepụta postime na oge-ma bụ enweghị ihe ọ bụla ị ga-etinye ma ọ bụrụ na i nwebeghị ihe ọ bụla ma ọ bụ nwee ihe mberede. "
A ga-ahụ ndepụta nke ederede kalenda ederede na ngwaọrụ ndị ọzọ na njedebe nke post a.
Një kupë tii, ihe ole na ole na-agbaji, a obere mmega ahụ, egwú dị nro na, nke kachasị mkpa, a echiche ziri ezi nwere ike niile aka gị mpaghara na, na ọ bụrụ na ị na-enwe mgbagwoju anya, ihe ole na ole i nwere ike ịnwale iji nyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị.
Dave Hermansen, 13 + Afrika e-Azë ahịa na-Azi ahịa e-commerce në Store Coach, Inc., na-eche ụzọ kachasị mma iji nọgide na-enwe echiche na-agbanwe agbanwe mgbe nile nke na-asọba, ọ dịghịkwa mgbe ọ na-apụ na ntinye ederede bụ:
Soro dị ka ọtụtụ blọọgụ metụtara dịka i nwere ike. Ha nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya nke sitere n’ike mmụọ nsọ. Debanye na ndepụta RSS nke blọọgụ ọ bụla metụtara gị ngrohtë. Kọọrọ onwe gị nchịkọta nke ụfọdụ n’ime isiokwu ndị dị mma ọbụna na-enweghị njikọ na ngrohtë gị. Jiri ha dị ka mmụọ nsọ maka ụfọdụ n’ime ihe ị nwere ike ide banyere. Kesaa ọtụtụ n’ime ezigbo isiokwu ịchọtara na netwọk mmekọrịta gị, mana chekwaa di na nwunye na ebe a dị ka echiche maka ihe ndị ị nwere ike idere nke gị.
Ịtụle isiokwu dị iche iche ma na-ele ha anya site na nkuku ọhụrụ, na ịmegharị ihe ochie gị ma ọ bụ postime ndị ọbịa bụ ihe niile a maara nke ọma na akụkọ nta akụkọ nke na-arụka.
Soro "muzë" të miratuara nga qeveria
Atụmatụ dị oke mkpa, ma hapụ ma ọ dịkarịa ala ụbọchị ole na ole n’izu ebe i nwere ike "na-aga na mmiri ahụ" ma na-enwe obi ụtọ na blog gị. Ide ihe mgbe ị na-enwe mmetụta sitere n’ike mmụọ nsọ site na "jam ihe" gị ga-eme ka ị zere iwe ọkụ ma nyere gị aka ịmepụtakwu echiche maka blog banyere ọdịnihu.
Mgbe m na-enwe mmetụta dị oke ihe na dị ka ide ihe, enwere m ike ide 2 ma ọ bụ 3 blọọgụ n’otu nnọkọ ka m wee nwee ole na ole n’ime tubacioni dị njikere ịga. Mgbe ụfọdụ m nwere echiche maka blog nke ga-adị ogologo, n’ihi ya, m ga-eme usoro 2 ma ọ bụ 3.
Ọ bụrụ na m gaa ogbako na-adọrọ mmasị ma ọ bụ nzukọ na mpaghara ndị m na-achọ, m ga-ede blog ma ọ bụ abụọ maka ya. Dịka ụmụmaatụ, mgbe m gara Karolina e Veriut SHRM (Shoqata e Burimeve Njerëzore Konferencë), [mgbe ahụ na ngwụcha izu] m debere mpempe abụọ abụọ maka okwu abụọ bụ isi nke m ga-ebipụta n’oge a [n’ọnwa].
Ọzọkwa, ọ bụrụ na m na netwọk na onye na-adọrọ mmasị ma ọ bụ azụmahịa, nke ahụ ga-enye m echiche maka blog, [ma] ọ bụrụ na m nweta ụfọdụ echiche maka blog m ga-edeba, ya, echefughị ​​m ya.
Danny Garcia kwenyere na “ị dị mkpa ịnweta atụmatụ ịdịnaya ma rapara na ya. Otu isi ihe dị na ndụmọdụ mmadụ nile na-enye ndị na-ede blọgụ bụ ịnọgidesi ike. Ọ baghị uru ọ bụla oge ị na – ezisa ma ọ bụrụhaala ndị na – agụ akwụkwọ gị mara ugboro ole ị na – ede biputere ma Rapara na nke ahụ. Aga m ekwu na ugboro ugboro adịghị mkpa ka ọrụ mma, mana ịnwe opekata mpe akwụkwọ ọnwa abụọ ọ dị mma. “
Garcia na-ekwupụta etu ọ dma mma karịa ọtụtụ mgbe ọ na-abịa ịde blọgụ, n’agbanyeghị ugboro ole n’izu ma ọ bụ ọnwa ị na-ebipụta. Ọ rụtụrụ aka n’ihe atụ ole na ole ndị a ma ama:
E nwere ndị na-ede blọgụ na blog kwa wabọchị (dị ka Neil Patel, ma ọ bụ Seth Godin) na ndị ọzọ na blog gburugburu ugboro abụọ n’ọnwa (dika Mark Manson ma ọ Ryan Ryan Ezumike). Ha niile nwere nnukwu ndị na-ege ntị, ọ bụghị dabere na ugboro ole ha na-arụ ụrụ, kama n’ihi àgwà ha.
Stan Kimer na-agbasi mbọ ike "ntanye 2 ma ọ bụ 3 blọọgụ n’ihu usoro," ya mere ọ nwere ike "inwe ihe dị njikere ma ọ bụrụ na m banye n’oge kachasị oge ma ọ bụ oge siri ike (ma ọ bụ ọbụna gaa ezumike!)."
A postime n’ịdị postime ịchọrọ ịgbakwunye na kalenda, yana ole, Julie Ewald na-atụ aro ka ị “nyochaa ebumnuche gị, ndị na-ege gị ntị, na oge ole (ma ọ ego) ị nwere ike itinye na bl . E kwesiri inwe post obula n’otu n’otu na agwa ndi nile n’eji okwu okwu okwu n’onwe ha n’uzo iji mezuo ebumnuche gi obula ma obu ihe i na ere ugbu a. Ee, e kwesịrị inwe nnyochi ebe a. “
Ewald na-atụ aro ka ị wepụta 4-na-6 postime kwa ọnwa, ma ọ bụ 2 kwa izu, dịka opekempe, ma n’ikpeazụ, we nwere ike ịga na nọmba ọ bụla ruo mgbe ị na-anọgidesi ike n’usoro oge ezipụ gị.
4. Na-eme ka ndị ịbịa banye n’ime oge gị
Mee ohere maka akwụkwọ ndị ịbịa na kalenda gị – ha adighi obere karịa postime gị, ha na – enyere aka blogkwalite blog na nka gị.
Ihe ị ga – agharịrịrịrịrịrịrị, ị ga – eleghara blọọgụ gị anya maka ịme ndị ịbịa, na ị naghị anoụcha ọkụ na mbalị ịme ma ikike kachasị elu.
Danny Garcia, njikwa njikwa ahịa na Stacklist.com, na-ekwu na “ikenye ndị ọbịa na-ekpughere gị ndị na-ege ntị ụhụrụ ma na-enye saịtị gị ihe njikọ bara uru, yabụ zere iwe iwe, ma ọa, ma a, na-ebute ụzọ idebanye ọbịa ma ọ bụ wepụta onwe gị (ọ bụrụ na enyeghị gị gị) nke ahụ kwesịrị inyere aka. “
Garcia chọpụtakwara, “Inwe usoro ide ihe na agbanwe agbanwe na-arụ ụrụ nke ọma. Achọpụtara m na m bụ onye okike kachasị ọhụrụ mgbe m tetara n’ụtụtụ wee dee maka awa 2 tupu ihe ndọpụ uche ọ bụla abanye n’ụzọ. Mgbe enwere ọtụtụ ihe ị ga – ede, ide ihe na – arụ rụ nke ọma, nke na – abụkarị ihe na – akpata iwe ọkụ. “
Ego ole ka ị ga-ede n’eziokwu na otu wanwa?
Were ọnụọgụ ahụ wee mee 2 postime n’ime ndị ịbịa ahụ. Ọ bụ ezigbo iwu nke isi mkpisi aka ka itule idozi mbọ gị iji Zere ma ọ bụ leda anya.
Dịka ọmụmaatụ, oge ntanetịime m na ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa ndị m nwere ike ide na otu ọnwa kwesịrị iji ihe mgbu ederede 1,000 – 1.500 mee kwa ụbọchị. Ịgbalị imekwu ihe ga-emerụ ahụike uche m ma tụfuo oge dum, ya mere, iwebata nke ndị ịbịa ga-abụ nke ọma na nke ọma.
Ụmụ nwoke Palmer na-echetara, sị, "Iwepụ ndị ịbịa bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-eto eto." Ọ na-ekwu na nke a bụ eziokwu karịsịa maka ndị na-ede blọgụ ọhụrụ, ma kwado ka "bipụtara ọdịnaya gị n’otu ugboro n’izu. Mgbe ahụ, ọ ga-eziga otu onye n’izu n’izu. "
Notchọghị imefusị oge ị na-eji zụọ ahịa mgbasa ozi na-elektrọta mmadụ, ka ị chọghị ka ọ rie ya oge edere.
Ga-enwerịrị oge iji gbaa ọwa mgbasa ozi mgbasa ozi gị na ịkwalite dịnaya gị yana maka ịgakwa ajụjụ ndị mmadụ na azịza ya.
Iji hụ na ahịa mgbasa ozi na-ere ahịa na ịde blọgụ ụ bụla na-eri ihe, mohoj aha maka Hootsuite. Bụ n’efu. Ugbu a maka usoro nhazi, [nha bụ] 70% -20% -10%:
70% nke mbak gị kwesịrị ka a kọọ – m na-ekwu maka retweets, foto / ri-share, na ihe ndị na-atụ n’anya na ị gbakwunye lil ‘Somethin’ kwa.
20% postime nke gị nwere ike ịbụ [ọdịnaya] ị kere – ụlỤ ọrụ blog gị na atụmatụ ndị ịbịa.
Iji bido mgbalị gị na-azụ ahịa mmekọrịta, gụọ anyị mkpa nduzi mgbasa ozi mgbasa ozi ịmara ihe na-arụ ọrụ na isi ihe ntanetị mmekọrịta ma na-elektwasị anya na nke ahụ.
Kedu ihe ị ga – eme ma ọ bụrụ na ịnwe ọnọdụ mberede na ụbọchị ịchọrọ? Ma kedu ka ị ga – esi mee ka echiche ‘jupụta’ mgbe niile mgbe ọ dị gị ka ihe ọ krijimi yt krijuese ụ okike gị agwụla?
Inwe oge dị nro ma sie ike ga – enyere gị aka ma ọ bụrụ na ị rịa ọrịa ma ọ bụ nwee ihe mberede, ma gị na ndị na – agụ akwụkwọ gị okwu bụ isi – ọ bụrụ na ịnweghide ikea eme ka ha mara ma ọ bụ na ị ga – emechu ha ihu ma okporo ụzọ gị ga – ada .
Ọ nwere ike ịdị mfe dịka ime ka ndị na – agụ akwụkwọ gị mara maka ya na na ọwa na – elektronọta mmadụ mgbasa ozi gị, nke mere na a – agwa ha ya. Iji mee ka echiche ahụ jupụta mgbe niile, ị ga-agụ karịa ka ị na-ede. Ihe ndị anyị dere na-emetụta ihe anyị gụrụ. Ichoro otutu uzo di iche iche maka edemede gi obula.
Mund nwere ike iji otu izu gụọ akwụkwọ naanị iji nweta ahịrịokwu ole na ole na na ederede gị, ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịgụ ọtụtụ ihe. Chọrọ ọtụtụ isi mmalite dị iche iche maka ozi / mmụọ. N’akwụkwọ, o nweghị uru ọ bara, mana gụgụ akwụkwọ na-eweta ihe ọmụma ma na-akpali imepụta ihe.
Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịchọpụta na kalenda gị ezughị oke maka ndụ onwe gị ugbu a. Mgbe ahụ, chee echiche imepụta obere usoro na-eleba anya na, ma ọ bụ usoro nd ndabere ’ị nwere ike iji mee ihe n’oge ndụ siri ike.
Kwa ọnwa, m na-anọdụ ala ma depụta ihe m chọrọ iji mezuo maka ọnwa ahụ. Dị ka ọmụmaatụ, enwere m ike ịtọ ihe mgbaru ọsọ ide X nọmba nke poston blog na nọmba X nke lọ ọrụ ndị ọbịa ma ọ bụ malite usoro ọhụrụ. Mgbe nke a gasịrị, m ga-agbaji ha n’ime ihe a ga-eme kwa izu.
Ọ bụrụ na m eme atụmatụ kpọmkwem ihe m ga-eme maka ụbọchị ọ bụla, enwere m ike nrụgide na-agbalị wanwa "mgbe niile" na-arụ ụrụ. Achọpụtala m na ọ na-esiri m ike imezu oge a na-eme kwa ụbọchị, n’ihi na enwere mberede na mberede na-eme, n’ihi ya, m na-etinye kwa izu kwa ọnwa.
Ụmụnna Palmer, CEO nke MysPalmer.com, maara na ndụ na-eme ma ị gaghị enwe ike izere ya mgbe ọ thjesht, yabụ “azihazi ọdịnaya gị otu izu tupu oge eruo na-elektọta ya. Needchọghị ịma mma. Banye na Hootsuite ma jiri ndị bipụta akwụkwọ lee izu na-abịa. Pịa oge, họrọ netwọk na nhazi oge. “
Ka o sina dị, ị gaghị na-emesi ya ike. Julie Ewald kwuru, sị: ”ụ bụrụ na ị ga-efu isi ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe ọzọ, awusi ya. “Po ju ozugbo i nwere ike. Ọ bụrụ na ị na-eme ụdị mbọ SEO ọ bụla, ị ga-ahụ mbiara okporo ụzọ na ọkwa dị elu ma ọ bụrụ na ị tigharịa kpam kpam. “
Ọ bụrụ na Ị Chọrọ Një Blogger
Nick Brennan, onye nchoputa na onye isi nke Lelee Social Media, na-ekwu, sị: "E nwere igodo atọ iji hazie ma ọ bụrụ na a na-edezi" na ị nwere onye ọzọ na-arụ ụrụ maka gị:
"Ọ bụrụhaala na ị nwere akwụkwọ edemede siri ike na ihe ndị a," ka Brennan na-agbakwụnye, "gwè gị ekwesịghị inwe nsogbu ịmepụta ọdịnaya dị mma site na mgbe niile."
Ịdo nwere onye ndu ebe a WHSR maka ịnye ndị edemede na ị nwere ike ịgụ: "Blogu i faqes Blogger na nchịkwa Redaktori: Ndiqni edemede edemede makina Blogu. "
Ọ bụ ezigbo echiche ịhazi mpempe akwụkwọ ndị a tupu oge – ọbụlagodi ọtụtụ ọnwa dị n’ihu – n’ihi na ha nwere ike ibute ọgbaghara n’okporo ụzọ ma yabụ ị nwereta.
I kwesiri, ị ga-eme atụmatụ nke oge oge na mmalite nke afọ ma gbochie ụbọchị kalenda ịde ha, yana oge gị. Nye oge zuru oke iji mee ihe, dịka ị ga-amaghị ihe nwere ike ime ọtụtụ ọnwa site ugbu a: kalenda rụrụ arụ ka mma karịa ọ bụla kalenda ma ọlị.
Ọzọkwa, i nwere oge iji chee echiche banyere ihe ndị ị na-eme ma jiri nlezianya jikọọ ha na ika gị, tinyere oge ọzọ itinye aka na nyocha na ịchọta ebe iji jụọ ajụjụ ọnụ og goo oe gao oe gao oe gao oe gao oe gao oe gao oe gao oe, uru, dịka i nwere ike weghachite ntule a ma ọ bụrụ na ihe mberede abịa.
Ọ ga-adị mma ịnwe wakwa maka iji gaa ụbọchị mbipụta] ma ọ bụ ụbọchị ga-aga. Oge ihe dị mkpa dị mkpa, mana ọ ka dị mkpa ka ị na-atụgharị post ezumike iji gosipụta ụdị gị.
Atụmatụ a na-arụ ọrụ na akwụkwọ ụ bụla ịchọrọ ibipụta, yabụ kpachara anya na ị na-eme atụmatụ ọtụtụ kalenda gị na mbido afọ, ma ọ bụ ọnwa 6 ụ bụla, ma ọ beka ape mta , “Gbalịa lelee ọnwa na-abịa site etiti nke gara aga. Kwadebe oge mkpado nke Novembernwa site site 15 tetor. “
Blog (Makina Falas Bloggw) Blog për Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Atụmatụ dị oke mkpa, mana ị gaghị eme ya niile aka! Enwere n’efu ma kwụọ ụgwọ ọrụ ị nwere ike iji rụọ ọrụ nke ma iji mee ka ọrụ ntanetị gị rụọ ma debe ihe nile n’okpuru njikwa, n’enweghị nchekasị.
CoSchedule bụ kalịnda nchịkọta weebụ nke dabeere kpọmkwem maka ahịa dịnaya.
Chris Brantner, mbi të gjitha CutCableToday.com, nuk është falas për të:
N’oge gboo, agara m na CoSchedule jikwaa blọọgụ m, ọ bụ ihe kacha mma m nwetagoro. Ọ bụghị naanị na ọ na – enyere m aka ịhazi ọrụ dị mfe na ọtụtụ ndị edemede na ndị editọ, mana ọ na – enye m ohere ịnabata echiche site na mmalite ruo na ikenye mgbasa ozi mgbasa ozi na na azta site nke agbakwunyere na WordPress.
Danny Garcia kwadoro ngwá ọrụ a maka atụmatụ nhazi, na Lori Soard depụtara ya dịka otu n’ime 10 njësi të ngjashme, ju lutemi bëni një ndeshje na-ede blọgụ.
Na-emezi ihe na WordPress
Kas mma edepụtara plugins makina WordPress pajisje:
Danny Garcia na-atụ aro "ngwá ọrụ na njikọta (…) nke ga-eme ka usoro ịde blọgụ dị mfe," ka një menaxher të detyrave.
Elizabeth Carter tụrụ aro sọftụwia a. “Ụ bụ ihe dị mfe, igwe ojii na-agbasa ngwa ọrụ nke na-eme ka ọ dị mfe ịgafe mpaghara data gbasara gafee usoro usoro iji. Dịka ọmụmaatụ, enwere m ike inwe kalenda nna m ukwu n’otu akwụkwọ, wee jikọta ya na akwụkwọ mgbasa ozi dị iche na-esochi isi okwu, ndị na-ede akwụkwọ, onye na-ere aha Ọ bụ ihe na-ahụ anya, ọ dị mfe iso ndị otu m kerịta ihe, ma nwee obi ụtọ iji ya. “
N’okwu Garcia, Hootsuite bụ “ngwaọrụ mgbasa ozi na-elektrọta mmadụ nke ga – enyere gị aka ịhazigharị postime në Facebook & Twitter ka ahịa mgbasa ozi na-ejedebe na-eri ọtụtụ oge “.
Ndihmoni me Ide të gjeneratorëve
Ndị mbido echiche bụ ndepụta nke ntinye ịde blọgụ iji mee ka ị bido ide ma zere ngọngọ onye edemede mgbe ị nweghị ike iwepụta isiokwu ma ọ bụ akụkụ iji dee banyere.
Lori Soard na-akọrọ 20 mmemme na post m wee chịkọta 15 blog gjeneratorë echiche iji nweta nhọrọ site na nhazi ahụ ma malite ịmalite n’enweghị echiche ọzọ.
Enwere ike ịnwale ngwá ọrụ ahụ n’efu ma ahịa malite na 14 $ / onye ọrụ / wanwa.
Ebe nrụọrụ weebụ a maara nke ọma "bụ ọzọ dị ukwuu iji hụ ihe na-agbanwe," ka Danny Garcia na-ekwu, "yana ụ bụkwa nnukwu ngwaọrụ ịchọta ndị ga-enwe mmasị na blog gị."
O nweere onwe gị iji ndị otu otu 15, mgbe ahụ ọnụahịa na-amalite na $ 8.33 / onye ụrụ / wanwa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta onwe gị, ngwọta dabeere na PHP maka kalenda gị, PHP-Kalinda bụ kalịnda na-emeghe emeghe nke ọma ị nwere ike ibudata ma wụnye na nkesa gị na ntakịrị i ach.
Enwere ọtụtụ ihe dị n’ịntanetị n’efu, nke ndị na-ede blọgụ biiri ka ịchọrọ ịme ndụ nke ha (na ndị ịbịa) na-ebi ndụ ka mma.
Suzi sitere në StarAMomBlog.com na-enye ya Ihe SMART qëllimet e Blogimit Ndiqni ederede obibi.
CoSchedule nwere n’efu ndebanye kalenda ịdịnaya maka grabs.
HubSpot na-enyekwa ndebanye ndebanye ederede ndị ịbịa.
na, Pinterest nwere ọtụtụ puku nhazi nhazi ịhọrọ site!
N’ezie, ị nwere ike ịmepụta usoro nchịkọta akụkọ nke na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na i chetara:
Ọzọ ndụ gị na ọnọdụ ahụike gị
Postime Ebu ole ị nwere ike dee n’eziokwu n’otu nwa
Ego ole ị nwere ike ụmepụta
Atụmatụ dị na ọgụgụ isi ị gụrụ na ntụziaka a sitere na ndị na-ede blọgụ na ndị ahịa m gbara ajụjụ ụnụ, na ụfọdụ site na ahụmahụ bekoni të gjithë. Ụfọdụ nwere ike isonyere ọnọdụ gị, ndị ọzọ nwere ike ọ bụghị, ma ebe ọ bụ na usoro nhazi blog bụ otu n’ime omume ndịị na-amụta site na ikpe na njehie, m ka na-akpọ gị ka ọtịt ị nwere ike iji nyere aka ghọta ihe na-arụ ọrụ maka gị ma gbagote gị onwe gị usoro ihe omume hacks.
Iji nwee Ihe ịga nke ,ma, onye blog-on-ede!